Ibhulogi | I-OptiSmile ™ Advanced Dentistry
Thumela umbhali By I-OptiSmile
Usuku lokuthumela 18 May 2022
Imaski Ivaliwe - Iphathi Ivuliwe
Sibungaza ngesitayela, neziguli kanye nozakwethu e-OptiSmile
I-SmileView App Launch
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-OptiSmile (@optismile)
Sikuthandile ukunibona nonke e-OptiSmile futhi sithemba ukuthi ningafinyelela emicimbini yesikhathi esizayo efana nalena.
Inkulumo yomsunguli kanye nombono uDkt Clifford Yudelman kulo mcimbi
Welcome abanesithakazelo abangani, kanyekanye.
Umdlandla uvezwa ngokuthi umdlandla, umlilo oqala ngenhlansi, umqondo, umbono wento ethile mkhulu kunathi, ukwenza umehluko ezimpilweni zabantu.
Eminyakeni eyisikhombisa edlule ngabuyela eNingizimu Afrika ngemuva kweminyaka engu-32 phesheya kwezilwandle.
Ngakhangwa ukuba ngibuye.
Ngigqugquzelwa uthando ngezwe lakithi nomndeni nesithandwa sami sasesikoleni esiphakeme, uRobyn, oseceleni kwami ​​namuhla. I-CEO yami kanye nesibani esiqondisayo.
Lapho ngineminyaka emithathu ubudala, ngathi kubaba, “Baba, ngifuna ukuba udokotela wamazinyo njengawe,” futhi angizange ngilahlekelwe yileso njabulo.
Bangitshela hamba omkhulu noma uye ekhaya! Lapho ngifika eKapa, ​​ngangisekhaya, ngakho ngangingenayo enye indlela; Kwadingeka ngihambe kakhulu.
U-OptiSmile wazalwa. A uya khona okwempilo yomlomo ukuthuthukiswa,mamatheka ukuvuselela kanye nokubuyiselwa okuphelele. Ukunikeza abantu ukuzethemba ukumamatheka nokuziveza ngokukhululekile.
Umbono wami wokweluleka ithimba lochwepheshe abanenhloso efanayo, wafezeka.
Sizibophezele ekuhlinzekeni okuningi Ithuthukile amazinyo atholakala noma kuphi emhlabeni ezingeni eliphezulu ikhono futhi uzwela, Futhi okuqotho onakekelayo. Iziguli zethu zingabangane bethu abakhulu.
Ngemva kweminyaka eyisikhombisa manje i-OptiSmile, “umkhuba”, manje isiyi- umkhiqizo othembekile,
Hhayi nje igama kodwa umbono. Akulona nje uphawu noma umbala, umqondo ohlala ezingqondweni zethu zamanje nezesikhathi esizayo zeziguli.
Ukuze iziguli zisithembe, kwakudingeka senze kanjalo ezithembekile.
azikho izimangalo noma izithembiso ezeqisayo, akukho ukuthengisa kanzima, akukho ngaphambi nangemuva kwezithombe ku-Instagram
Okulandelayo, kwakufanele sibe ethembekile, ngokuqhubekayo sigcwalisa izibopho zethu ngesikhathi.
Singa ukuphendula futhi sizibophezele ngokugcwele kukho konke esikwenzayo. Azikho izaba.
Ubuqotho kubonakala emazwini nasezenzweni zethu
Singa Qinisekile. Siyazikhathalela ngokweqiniso futhi neziguli zethu
Siyakhombisa Ukuthobeka futhi sabelane ngesikweletu sempumelelo nethimba lethu, sivuma ingxenye edlalwa abahlinzeki bethu nochwepheshe belebhu abahle kakhulu.
Umkhiqizo wethu wakhiwe ukumamatheka okuqinisekisiwe kanye nesiguli esijabule ngesikhathi, esisodwa esihle Isibuyekezo se-Google ngemva kwenye.
Kuso sonke isixuku, kukhona abampofu nabangenakho. Kulesi sixuku, namhlanje ebusuku kukhona abanye benu abasinikeze isibuyekezo ku-Google, futhi kukhona abangaka….siyazi ukuthi ungubani!!
I-OptiSmile ihambe ibanga elide, kodwa kusekuningi okusamele sikuhambe futhi namuhla kuwumkhosi wokugubha Freedom futhi passion, of Trust kanye ne-OptiSmile
Sicela niphakamise ingilazi yenu niziphuzele ithosi.
Usuku lokuthumela 23 Ephreli 2022
ama-aligners asebenzayo eKapa
Konke Odinga Ukukwazi Nge-Invisalign Sula Aligner eKapa
Ingabe ukhathazekile ngamazinyo akho ayisigwegwe futhi angaqondile athinta ukumamatheka kwakho? Ingabe uyafisa ukulungisa amazinyo akho kodwa awufuni ukugqoka lezo braces zensimbi ezingenabuhle nezingalungile? Ngemuva kwalokho, ungajoyina iklabhu yokumamatheka enhle.
Iyiphi enye indlela yokufaka izinsimbi?
Ungakhathazeki; kwa-OptiSmile, sinikeza inketho elula, ekhululekile, engabonakali futhi engabonakali ukukunikeza amazinyo aqondaniswe ngokuphelele naqondile. Ngenxa yalokho, uzoba nokumomotheka okuthandekayo nokuhlala njalo ekupheleni kwesikhathi esifushane sokwelashwa.
Sinikeza "Ama-Invisalign Clear Aligners" angempela avela e-USA. Kuphelile 12 abayizigidi ezingu abantu emhlabeni wonke bayamamatheka ngokuzethemba ngemva kokuqondanisa i-Invisalign. Leli yithuba lakho lokuthola amazinyo aqondile ngaphandle kwezinsimbi!
I-Invisalign iyisistimu yokuqondanisa esebenzayo ekhiphekayo ebonakalayo eklanyelwe ukungena phezu kwamazinyo akho. Zenziwe nge-polymer enegunya lobunikazi yekhwalithi ephezulu ebizwa ngokuthi “SmartTrack. Iqoqo ngalinye lama-aligner linyakazisa amazinyo akho kakhulu.
Amazinyo akho agcina esesimweni esikahle sokukunikeza ukumamatheka kwamaphupho akho. Lolu uhlelo lwaseMelika olusetshenziswa emhlabeni wonke futhi luzuze impumelelo eyi-100%. I-invisalign aligners ayibonakali kuphela uma igqokile, kodwa iguquguquka kakhulu futhi ilula kunezinsimbi ezimisiwe zendabuko.
Ingabe Ngingumuntu Oqokelwe Ukwelashwa Kwe-Invisalign?
Noma ubani onamazinyo angaqondile noma agwegwile uyikhandidethi lama-Invisalign aligners. Ezinye zezinkinga ze-orthodontic eziphathwa ngempumelelo nge-Invisalign aligners zifaka:
Izikhala phakathi kwamazinyo - izikhala eziningi phakathi kwamazinyo aseduze, owaziwa nangokuthi i-diastema, adala izinkinga zobuhle futhi abangele ubunzima ekudleni nasekukhulumeni.
Ukuminyana kwenzeka lapho kungekho gumbi elanele emihlathini ukuze kuhlaliswe wonke amazinyo ngendlela efanele. Ukuqondanisa i-Invisalign kungalungisa izimo ezimaphakathi nezimaphakathi zokugcwala kwamazinyo.
Vula ukuluma - ukuluma okuvulekile kwenzeka lapho amazinyo aphezulu naphansi engahlangani lapho umlomo uvaliwe. Ngaphandle kokudala izinkinga zezimonyo, ukuluma okuvulekile futhi kudala izinkinga ngenkulumo nokudla.
Ukuluma okujulile - ukuluma okujulile yilapho amazinyo angenhla edlula ngokweqile aphansi abheke phezulu. Ukulunywa okujulile kungabangela izinkinga ezihlukahlukene, okuhlanganisa ukuphazamiseka kwamalunga emhlathi, ubuhlungu bekhanda, ukuguga kwamazinyo kanye nezimbobo zamazinyo.
I-Crossbite - i-crossbite kwenzeka lapho imihlathi yomibili engenhla nengezansi ingaqondani kahle. Ngenxa yalokho, izinyo elilodwa noma ngaphezulu angaphezulu alala ngaphakathi uma kuqhathaniswa nangaphansi. Ama-crossbite angalashiwe angabangela ukuguga ngokweqile kwamazinyo, ukuzwela kwamazinyo, ukuphazamiseka kwe-TMJ, kanye nezimbotshana zamazinyo.
Ngingaqala Kanjani Nge-Invisalign?
Ukuhlolwa Komtholampilo Nokuhlelwa Kokwelashwa - ukuthola amazinyo aqondile nge-Invisalign kuqondile futhi kulula. Vakashela I-OptiSmile ngokubonisana; sizokwenza ukuhlola okunemininingwane yomtholampilo ukuze siqinisekise ukufaneleka kwakho futhi sihlonze inkinga ewumsuka. Sizophinde sibheke amazinyo akho kumamodeli ocwaningo e-3D kanye nezithombe ze-x-ray ukuze sakhe uhlelo lokwelapha lomuntu siqu.
I-Digital Scan Impressions kanye nokuklama ama-Aligners akho - Okulandelayo, sizokwenza okuvelayo kwedijithali ye-3D yamazinyo akho. Bese, isithwebuli se-Invisalign "iTero" sizolayisha izikena kusofthiwe ekhethekile ebizwa ngokuthi "ClinCheck". Lokhu kusivumela ukuthi sakhe isethi yokuqondanisa okuzohambisa kancane amazinyo akho ekuqondaneni okufanele.
Isofthiwe iphinda ibone ukumamatheka kwakho kanye nobuhle bobuso uma ukwelashwa sekuqediwe. Ngakho-ke, uzokwazi kahle ukuthi amazinyo akho azobukeka kanjani ngemva kokwelashwa, ngaleyo ndlela uqede isici sokungaqiniseki. Alukho olunye uhlelo lokuqondanisa olucacile noma olusebenzayo olungenza lokhu.
Ama-invisalign aligners aklanyelwe ukugqokwa phezu kwamazinyo akho. Sizokunikeza isethi yamasethi okuqondanisa anezinombolo - ithreyi yokuqondanisa eyodwa yomhlathi ngamunye. Uzocelwa ukuthi ugqoke i-aligner ngayinye isethi cishe isonto elilodwa, okungenani amahora angu-22 ngosuku.
Ama-aligners aklanyelwe ukuba abe nengcindezi emnene emazinyweni akho futhi kancane kancane awahambise ekuqondaneni. Ngemva kwesonto elilodwa, kufanele ushintshele kusethi elandelayo yokuqondanisa izinombolo. Ngale ndlela, isethi yokuqondanisa ngayinye izokulethela isinyathelo esisodwa eduze nokumomotheka kwephupho lakho.
Ngemuva kokugqoka wonke amathreyi e-aligner, sizokunikeza "i-Vivera" yokugcina nge-Invisalign. Azikho izintambo zensimbi ezinamathiselwe ngemva kwamazinyo akho lapha. Udinga nje ukulala namaViveras.
Ngokusho the I-American Association of Orthodontists, ama-retainers abalulekile ngemva kwakho konke ukwelashwa kwe-orthodontic. Inhloso ye-retainers ukuvimbela amazinyo akho ukuthi abuyele emuva ezindaweni zawo ezindala.
I-Invisalign Treatment Ithatha Isikhathi Esingakanani?
Isikhathi sokulungisa ukungahambi kahle kwamazinyo ngama-aligners acacile sincike ebunzimeni benkinga ewumsuka. Ngokwabakhiqizi be-Invisalign aligner, ubude besikhathi sokwelashwa buqhathaniswa nezinsimbi zendabuko. Ngokuvamile, ukwelashwa nge-Invisalign kuzoqedwa phakathi kwezinyanga ezi-4 neziyi-12. Ubude besikhathi sokwelashwa buphinde buncike ekuthotshelweni kwesiguli kanye nokuhambisana nezincomo zikadokotela wamazinyo.
Yiziphi Izinzuzo zama-Invisalign Aligners?
Uma usazibuza ukuthi kungani kufanele ucabangele ama-aligners acacile ekwelapheni kwakho nokuthi angakusiza kanjani ukuthi ujabulele ukuzethemba okwandayo nempumelelo? Nazi ezinye izinzuzo ze-Invisalign phezu kwezinsimbi zensimbi.
Ayibonakali - Okuqondanisa i-Invisalign cishe akubonakali futhi ngeke kuthinte ukumamatheka kwakho nobuhle bobuso lapho uzigqokile.
Ukuzethemba okukhulu - Ungagqoka okuqondanisa okucacile nabasebenzayo emibuthano yokuzijabulisa, emihlanganweni yomsebenzi, ngisho nangezinsuku. Uzoba nethemba lokuthi okuqondayo kwakho ngeke kubonakale kunoma ubani.
Induduzo Nokunethezeka - Ama-invisalign aligners enziwe ngento enelungelo lobunikazi eguquguqukayo ewenza akhululeke. Ukuqondanisa okucacile akubangeli ubuhlungu obuphawulekayo, ukungakhululeki, nokulimala kwezicubu ezithambile, ngokungafani nezinsimbi eziqinile zensimbi ezimweni eziningi.
Impilo Yomlomo Ethuthukisiwe - abagqoki bezinsimbi bavame ukuba nobunzima bokuxubha futhi ikakhulukazi ukucwenga lapho behlanza amazinyo. Inhlanzeko yomlomo evamile inzima futhi idla isikhathi ngenxa yabakaki nezintambo. Le nkinga iqedwa ngama-Invisalign aligners, njengoba ungakwazi ukuwasusa ngenkathi uxubha futhi ushayela.
Ayikho Imikhawulo Yokudla - nge-Invisalign, ayikho imikhawulo yokudla! Ungasusa okokuqondanisa kwakho ngenkathi udla ukudla okuthandayo futhi umane ukubuyisele uma usuqedile. Kulula kanjalo!
Ukuqondisa amazinyo akho kanye nemiphumela oyifunayo akukaze kube lula! Ngenxa yokuqondanisa okucacile kwe-Invisalign, ungakwazi ukulungisa amazinyo akho ngaphandle kokuqaphela muntu.
Uzowuthanda umphumela - ukumamatheka okuhle, okunempilo, nokuhlala njalo! Ngakho-ke, usalindeni? Ngiyacela bhuka i-aphoyintimenti nathi namuhla, futhi ake sikunikeze ukumamatheka obuhlale ukuphupha ngakho.
Usuku lokuthumela 3 Ephreli 2022
Ukuxubha nokubhabhaza kubalulekile ukugcina amazinyo nezinsini ezinempilo, kepha kungenzeka yini ukweqisa le mikhuba emibili?
- Ukuxubha ngamandla kungalimaza koqweqwe lwawo lwamazinyo
- Ukutshuza ngaphezulu kwesisodwa ngosuku kungadala ukuzwela futhi kwenze izinsini zehle
- Ukusebenzisa i-mouthwash esekwe otshwaleni ngaphezu kokuphindwe kabili ngosuku kungalimaza izicubu zomlomo
Udokotela wamazinyo wakho angakusiza ukuthi ubuyekeze inqubo yakho yokunakekelwa kwamazinyo futhi unikeze iziphakamiso ezisebenzayo zokuthi ungakuthuthukisa kanjani.
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/is-it-possible-to-brush-floss-and-clean-your-teeth-too-often/
Amathegi udokotela wamazinyo, zezempilo, Smile, amazinyo
Udokotela Wamazinyo Wezimonyo Dental Health
Usuku lokuthumela 21 Mar 2022
Hhayi nje ngenxa yegebe elishiya ngemuva, kodwa futhi nangenxa yendlela umlomo wakho, amazinyo, umhlathi nobuso okuzohamba ngayo ukwamukela nokulungisa ukulahleka.
Uma ulahlekelwa izinyo, izinto ezimbalwa zizoqala ukwenzeka. Umphumela osobala kakhulu wamazinyo alahlekile wubuhle - indlela obukeka ngayo ithinta indlela ozizwa ngayo, nemiphumela engokwengqondo nengokwenhlalo yokulahleka kwamazinyo nayo ingaba mikhulu.
Okusobala kakhulu, kepha mhlawumbe umphumela onomthelela kakhulu wamazinyo alahlekile awukho kangako ngamazinyo kepha kumayelana nethambo, elidinga ukukhuthazwa ukugcina isimo salo kanye nobuningi. Ithambo le-Alveolar lizungeze futhi lisekele amazinyo, futhi lidinga ukuvuselelwa kwamazinyo ukuze kubambe ukuqina kwalo. Uma ulahlekelwa izinyo, ulahlekelwa ukukhuthazeka okuya kuleli thambo futhi ngaphandle kokukhuthazeka, leli thambo lizolahlekelwa ukuphakama, ububanzi futhi ekugcineni ivolumu okuzodala izinkinga ngokuhlafuna, ukukhuluma nokubukeka kwakho kukonke.
Ukulahleka kwamathambo kuzoguqula ukuma nesimo sobuso bakho, kuguqule ukubukeka kwakho konke. Amabala lapho amazinyo engekho khona azokwehla futhi angawa ngisho nokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke ukuthola ukwesekwa okufanele lapho ulahlekelwa izinyo kubalulekile empilweni yakho yonke, impilo yakho nokubukeka kwakho.
Ubuchwepheshe bamazinyo esibusebenzisayo siyakhethwa futhi busetshenziswe ngenhloso ethile yokunikeza iziguli izixazululo ezinhle kakhulu ezitholakalayo. Ngakho-ke uma uza ku-OptiSmile ye- izimpande, amabhuloho or ama-veneers, ungaqiniseka ukuthi sizosebenzisana nawe ukwenza yakhela ukumamatheka okuhle kakhulu kwakho.
Kungani Kufanele Unakekele Uqweqwe Lwamazinyo?
Usuku lokuthumela 24 Feb 2022
Uqweqwe olukhona ebusweni bamazinyo ethu luzosiza ukuvimbela ukubola futhi luvimbe izimbotshana. Noma kunjalo, le ngubo ingaba mncane futhi igugile ngokuhamba kwesikhathi. Ake sibheke ezinye zeziphakamiso ezenziwa udokotela wamazinyo onguchwepheshe.
- Ukudla izithelo nemifino eningi kuzosiza ukugcina impilo yoqweqwe lwakho.
- Zinike imizuzu engama-30 ngemuva kokudla ngaphambi kokuxubha amazinyo.
- Yidla ukudla okunoshukela okumbalwa, bese ugeza umlomo wakho ngemuva kokudla noma yikuphi kwalokhu.
- Uma unokubola nezimbotshana, sekuyisikhathi sokubona udokotela wamazinyo wakho kaningi.
Qiniseka ukuthi uthola inani elanele le-calcium nevithamini D ekudleni kwakho. ”
Linda! Musa Ukuxubha ngokushesha ngemuva kokudla lokhu kudla
Usuku lokuthumela 12 Feb 2022
Ukudla neziphuzo ezithile kuyaziwa ngokubanga ukwakheka kocwecwe nokuthi kungenzeka kulimaze koqweqwe lwawo. Odokotela beluleka ukuthi ulinde imizuzu engama-30 ngaphambi kokuxubha ngemuva kokuba ukujabulele, ngoba lokhu kuzosiza ukuvikela koqweqwe lwawo.
- Izithelo ezomile zinamanani aphezulu kashukela angaba yingozi koqweqwe lwamazinyo
- Amaswidi anamathelayo kanye / noma ambozwe ushukela ayaziwa ngokukhiqiza uqweqwe oluningi
- Iziphuzo ezi-fizzy notshwala kuqukethe izinto ezine-asidi ezingalimaza koqweqwe lwawo amazinyo
Ungakhohlwa, linda imizuzu engama-30 bese uxubha amazinyo akho kahle ukuvikela koqweqwe lwawo.
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/spend-some-extra-time-brushing-after-eating-these-foods/
Udokotela Wamazinyo Sea Point
Usuku lokuthumela 11 Feb 2022
Abantu abaningi bayazazi ngamazinyo abo nokumamatheka kwabo.
Uma ungeneme ngokumamatheka kwakho futhi ufuna ukuthuthuka okucashile, ufuna ukufaka esikhundleni somsebenzi wamazinyo osephelelwe yisikhathi noma ophukile, noma unezinkinga ngokusebenza nobuhle bamazinyo akho, i-OptiSmile Smile Ushintsho olungcono lungaba yimpendulo yakho!
I-OptiSmile iletha indlela ehlukile yokwakha kabusha ukumamatheka kwakho. Siyaqonda ukuthi wonke umuntu uhlukile - enezici zakhe ezihlukile namaphutha. Ngenkathi odokotela bamazinyo abaningi bezimonyo bethatha ukubukeka okufanayo kokumamatheka ngakunye abakuphindayo, sibheka ubuso bomuntu ngamunye bese sakha ukumamatheka okulungele ngokuphelele. Ukumamatheka okukodwa akulingani konke futhi sazi kahle ubunzima obubandakanyeka ekudaleni ukumamatheka okuhle kuwe.
Ushintsho olungcono lokumamatheka luqukethe izindlela ezahlukahlukene zokwelashwa ezenziwe ndawonye ukudala ukumamatheka okuhle. Lezi zindlela zokwelapha zingabandakanya ukwenza mhlophe, ukuvezwa kanye nokungabonakali - UDkt.Harris ukuphela komhlinzeki we-platinum Invisalign eNtshonalanga Kapa - ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi ukumamatheka kwakho kuzoba sezandleni ezinhle kakhulu.
Ushintsho olungcono lokumamatheka kuzovuselela ukuzethemba kwakho, kukunikeze amandla owadingayo ukuze ufeze izinhloso zakho. Ukuze uthole i-Optimum Smile Makeover Experience, thintana naye I-OptiSmile namuhla.
Ingabe Yonke Le X-Rays Udokotela Wamazinyo Wami Unginikeza Kudingekile?
Usuku lokuthumela 31 uJan 2022
Impendulo emfushane ithi cha - awudingi i- uhla oluphelele yama-x-ray kuyo yonke inkinga yamazinyo ohlangabezana nayo.
Imvamisa, odokotela bamazinyo bazo-oda ama-x-ray amaningi ukuze bahlole kahle umlomo nezakhiwo zomlomo. Kunezikhathi lapho odokotela bamazinyo beqa ngokweqile yize - imvamisa kuneziguli ezintsha - futhi ba-oda ama-x-ray amaningi angadingeki empeleni njengengxenye yeprotocol yawo. Imisebe ekhiqizwa ama-x-ray incane, kepha kufanele kwenziwe yonke imizamo ukunciphisa ukuvezwa nokunciphisa ukusetshenziswa kwemishini ye-x-ray.
Ngalesi sizathu, ukubonisana ngakunye kudinga ukwenziwa kube ngokwakho futhi ama-x-ray kufanele a-odwe kuphela lapho kunesidingo. Udokotela wakho wamazinyo kufanele aqale ahlole kahle umlomo nezakhiwo zomlomo ukuthola ukuthi ngabe zikhona yini izindawo ezinenkinga ngaphambi koku-oda ama-x-ray ukuthi aqhubeke nokuhlola lezi zindawo ezinenkinga.
Uchungechunge lomlomo olugcwele lwama-x-ray kufanele lubekelwe iziguli ezenze izinqubo eziningi zamazinyo noma ezibolile ngokweqile, kanti iziguli ezisengozini enkulu yokubola kufanele zi-x-rays kuphela eziyalwe njalo ezinyangeni ezi-6 - 18. Isiguli esingekho engcupheni enkulu kufanele senze ama-x ray kuphela njalo eminyakeni emi-2 - 3 futhi izingane, ezizwela kakhulu emisebeni, akufanele neze zenziwe ama-x-ray.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-X-ray wamazinyo, kufaka phakathi:
Ukuthwebula ama-X-ray, aveza izimbotshana eziphakathi kwamazinyo. Zibizwa ngokuthi ama-bitewings ngoba uluma phansi entweni emise okwamaphiko ukubamba ifilimu ye-X-ray endaweni yayo.
I-X-ray yama-panoramic, edinga umshini okhethekile ozungeza ikhanda ukuze unikeze umfanekiso oningiliziwe wawo wonke amazinyo namathambo angaphansi ku-X-ray eyodwa.
Ama-X-ray e-Periapical, athatha izithombe zamazinyo amabili noma amathathu ngasikhathi. Bangadalula ithumba elibangelwa ukutheleleka noma izimpande ezibolile, okuyizilonda ezansi kwezinyo. Ifilimu ibekwa kumnikazi, bese ifakwa ithi nkqo emlonyeni ukuthatha i-x-ray.
Izikena ze-Dental cone-beam CT (CBCT), ezinikeza izithombe ze-X-ray ze-3-D zamazinyo, izimpande zawo kanye nomhlathi.
Uma unokukhathazeka ngenani lama-x-ray odokotela bakho bamazinyo abakuyalile, bacele ukuthi bachaze injongo yalowo nalowo. Uma udokotela wakho wamazinyo ekutshela ukuthi umthetho olandelwayo noma inqubomgomo yawo uku-oda ama-x-ray amaningi, ungawenqaba ama-x-ray bese ucela ukuthi kwenziwe ama-x-ray adingekayo kuphela.
Uma unesifiso sokwenza ngcono unomphela ukumamatheka kwakho, noma unemibuzo, xhumana no-OptiSmile namuhla. Ithimba lethu elinolwazi lingaphendula imibuzo yakho futhi likusize ngemithi yokwelashwa oyidingayo.
Ukuqinisekisa ukuthi ingane yakho iwanakekela amazinyo ayo
Usuku lokuthumela 27 uJan 2022
Imikhuba emihle yamazinyo ingagxiliswa esemncane, okuholela emazinyweni anempilo impilo yonke. Okubalulekile okuthathayo: - Khuthaza indlela yokunakekela ngomlomo ejabulisayo, evamile ngokubavumela bazikhethele esabo isixubho futhi baxubhe amazinyo bacule ingoma abayintandokazi. – Fundisa ingane yakho ngemiphumela elimazayo kashukela ukuze uyisize iqonde ukuthi kungani ukudla okulula okunoshukela neziphuzo kudingeka kulinganiselwe. – Thatha ingane yakho iyohlolwa njalo kudokotela wamazinyo kusukela isencane kakhulu ukuze uqinisekise ukuthi noma yiziphi izinkinga zibonwa kusenesikhathi. “Ukunakekelwa kwamazinyo okungalashwa kusesinye sezifo ezivame kakhulu ezithinta izingane” Funda udaba oluphelele lapha: http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/kids-teeth-dentist-advice_uk_5a5c7529e4b0fcbc3a11a5b0
Impilo yamazinyo ngamafuphi
Udokotela wamazinyo uSea Point unikeza amathiphu ngemikhiqizo
Alukho usuku oludlulayo lapho iziguli zingangibuzi ukuthi “Kufanele ngisebenzise hlobo luni lwamabhulashi?” noma "Ungasincoma isibalo esihle samazinyo?" Njengoba izigidi zemikhiqizo zigcwala amashalofu ezitolo ezinkulu, kungaba nzima ukwazi umehluko phakathi komkhiqizo wekhwalithi nefashoni yakamuva esungulwe kuphela ukukhipha amaphakethe akho.
Ukusiza ukwenza ukukhetha kube lula, ngiqoqe uhlu olufushane lwezinto ezibalulekile ezizokwenza kahle ukugcina umlomo namazinyo akho enempilo.
Nazi izincomo zami zempilo yamazinyo isiyonke:
Ama-flosses amaningi wamazinyo enza lokho okudingeka akwenze, kepha kulula ukusebenzisa i-floss ene-wax futhi eyodwa enokunambitheka okukhulu yenza konke ukuzivocavoca kube nomvuzo omkhulu - Akukho okungcono kunokuzizwa usha. Khumbula, akudingeki ukuthi uvule onke amazinyo akho… Yizo nje ofuna ukuzigcina!
Isincomo sami somkhiqizo: Johnson & Johnson Expansion Plus
Abantu abaningi abakwazi ukufloss, ngeke bathande, bazonde i-floss noma "baphelelwe nje" i-floss. Ngemuva kweminyaka engama-25 ngizwile zonke izaba ezisencwadini. Yebo, ukukhishwa kwe-floss kungaba ukuhudula. Ngenhlanhla, kukhona enye indlela kulabo benu ababonakala sengathi babhekene nokuqhuma. Amabhulashi ama-inter-proximal amabhulashi amancane alingana namazinyo akho. Angikhulumi ngamakhulu amakhulu azolingana kuphela ngaphansi kwebhuloho, eduze kokufakelwa noma uma uke waba nesifo se-periodontal - lokhu kwehlukile. Futhi basebenza njengebhomu!
Isincomo sami somkhiqizo: I-Gum Trav-Ler noma i-Gum Bi-Direction
Okuncane ongakwenza ukukhetha amazinyo akho ngemuva kokudla, akunjalo? Angiqondile ngokuthinta amazinyo ongena eMartini yakho noma ekhoneni lekhadi lebhizinisi elidala… Ngikhuluma ngezintathu ezikhethekile ezingunxantathu ezenziwe ngokhuni oluthambile. Lokhu kwenziwa ngokukhethekile ukususa ngobunono izingcezwana zokudla emazinyweni akho futhi ngaphezu kwakho konke, azilimazi izinsini zakho.
Isincomo sami somkhiqizo: I-Gum Soft-Picks
Kuyohlale kukhona ibhulashi lamazinyo elithobekile, elenziwa ngesandla (okufanele ngabe lithambile, ngasendleleni), kepha isixubho sikagesi noma samandla yilapho kufanele ngabe usebenzisa khona imali yakho. Kunoma ikuphi, uma uzotshala ithuluzi lamazinyo akho, thola okungcono kakhulu, noma iyiphi inketho oyikhethayo. Iziguli eziningi zenza kangcono ngebhulashi elenziwa ngezandla kunalezo ezishibhile ezilahlwa ngogesi.
Isincomo sami somkhiqizo: ICuraprox Super Soft 3960
Ulimi lokususa ulimi
Ukuhlanza ulimi noma ukusula kuyithuluzi elibalulekile lokuphefumula okusha. Lokhu kusebenza kangcono kakhulu kunokuxubha ulimi. Sinikeza zonke iziguli zethu eyodwa engiyithuthukise ngokwami ​​ebizwa nge- “Breath-So-Fresh”. Amanye amakhemisi manje anezimbalwa ezahlukahlukene ezisesitokweni futhi ngiyaninxusa ukuthi nizame eziningana, ngoba zonke izilimi zihluke kancane. Thola eyodwa efinyelela emuva kwengxenye yesithathu yolimi futhi ayibukhali kakhulu, kepha isasebenza.
Iningi leziguli zami alizidingi. Maduze nje ngizothumela ngempikiswano emayelana nomdlavuza womlomo kanye nokuhlanza utshwala obunamandla. Kwezinye izimo, ngincoma i-Curasept Chlorhexidine 0.12% umuthi wokuxubha ongagcini amabala nokugeza umlomo, kepha ngombono wami, ukuhlala kude nokusha sha, konke ukwelashwa okumangazayo kuyindlela yakho engcono kakhulu.
Angiyena umlandeli wezinto zokuxubha ezibizayo eziqukethe izithako eziyizigidi. Konke okudingayo i-abrasive ne-fluoride emnene, futhi-ke ukunambitheka okuhle akulimazi!
Isincomo sami somkhiqizo: IColgate Ingqikithi engu-12 noma iColgate Maximum Cavity Protection Plus Ushukela Acid Neutralizer
I-Plaque edalula amaphilisi
Yebo, ngiyazi, basendulo. Kodwa amaphilisi amancane owahlafunayo enza wonke amazinyo akho abenombala obomvana asekhona. Umbala obomvana ukhombisa lonke uqwembe olulahlekile ngemuva kokuxubha - Lula futhi lisebenza kahle! Amaphilisi amasha aseyatholakala akhombisa uqwembe oludala ngokuluhlaza okwesibhakabhaka.
Isincomo sami somkhiqizo: (Faka igama lomkhiqizo)
Awukwazi ukuxubha ngempumelelo ngaphansi kwemizuzu engu-2 noma ngabe iyiphi inqubo yakho. Kuzwakala sengathi kunaphakade, kepha woza, yimizuzu engu-2 kuphela! Umsebenzi omncane kakhulu wemiphumela emikhulu kakhulu - Yini ongayithandi?
Kwakho ubuhle bamazinyo,
UDkt Clifford Yudelman
Ingabe Ukuhlanzwa Kobuchwepheshe Kuyadingeka Ngempela?
Usuku lokuthumela 22 uJan 2022
Yebo. Yebo zikhona.
Impela, ungaxubha amazinyo akho ngemizuzu engu-2 enconyiwe ngosuku ngemuva kokudla ngakunye, ungabhabhalaza kabili ngosuku futhi ungayeka ushukela, ikhofi, iwayini nokubhema. Lezi zinto zizothuthukisa impilo yonke yokumamatheka kwakho - kepha noma ngabe ulandele zonke izincomo ezenziwe udokotela wamazinyo ekhaya, kusazodingeka ukuthi uhlele ukuhlanzwa okujwayelekile kobuchwepheshe.
Ukuhlanza okwenziwa ngabachwepheshe akubalulekile nje ekuhlanzekeni kwakho ngomlomo, kepha kusinikeza ithuba lokuhlola umlomo kahle nokuphenya noma yiziphi izinkinga ezingaba khona. Izazi zokuhlanzeka ziqeqeshelwe ukuthola izingqinamba ezingaba khona zamazinyo futhi zingaluleka udokotela wamazinyo wakho ngalezi zinkinga ngesikhathi / ngemuva kokuzihlanza ukuze zilashwe ngaphambi kokuba zibe zimbi kakhulu.
Uma kushiwo lokho, nazo zibalulekile ekuhlanzekeni kwakho ngomlomo. Akunandaba noma ngabe inhle kangakanani imikhuba yakho yokuhlanzeka kwamazinyo, izinhlayiya zokudla ne-plaque zisazoqhubeka zikhona. Uqwembe luyakheka lube yitartar - ungqimba loqwembe oluqinile ebusweni bamazinyo. Le tartar ingasuswa kuphela ngamathuluzi akhethekile nomuntu oqeqeshelwe ukuwasebenzisa - ohlanza amazinyo.
Ngakho-ke, ukuba nombuso omuhle wokuhlanza kubalulekile empilweni yakho yamazinyo futhi kufaka phakathi ukuhlanzwa okujwayelekile kulo mbuso kubalulekile empilweni yonke nasekuphiliseni kokumamatheka kwakho. Sishayele uma unemibuzo mayelana nenhlanzeko yamazinyo, abasebenzi bethu abanobungane bayakujabulela ukukusiza. Okwethu umkhuba wamazinyo endaweni yolwandle ifakwe ubuchwepheshe bamuva bamazinyo, ngisho nokuhlanza kwethu kwenziwa kusetshenziswa phezulu kwemishini yolayini.
Ukuqonda ukufakelwa kwamazinyo kosuku olufanayo
Ingabe unamazinyo alahlekile? Ukufakwa kwamazinyo kuyindlela yokubuyisa amazinyo akho nokumamatheka. Kodwa-ke, ngokuphila kwanamuhla okumatasa, inqubo ingase ibonakale yinde kakhulu. Kodwa ingabe kunjalo?
- Izimila zamazinyo zosuku olufanayo zingenzeka kakhulu, inqobo nje uma umlomo wakho usempilweni enhle.
- Ukufakwa kwamazinyo okwesikhashana kufakwa kusetshenziswa umqhele wesikhashana obekwe kuze kube yilapho ukufakwa kufithiza nethambo.
- Izimila zamazinyo zosuku olufanayo azihlukile kakhulu kwezendabuko.
Usazodinga ukuvakashelwa udokotela wamazinyo, ukuze uyohlolwa.
Funda kabanzi lapha:
Izinto Ongazifunda Ngokuhlola Amazinyo Akho
Usuku lokuthumela 14 uJan 2022
Izinkinga ngezinsini zakho, izindebe, ulwelwesi lwezihlathi, amazinyo nolimi kungakhombisa izingqinamba ezibucayi emzimbeni wakho. Nazi izimpawu okufanele uzibheke.
- Ngenkathi izimbotshana ezimbili noma ngaphezulu ngasikhathi sinye kungaba uphawu lwesifo sikashukela.
- I-Worn tooth koqweqwe kungasho ukuthi une-acid reflux.
- Izinsini zokopha kuwuphawu lwesifo sezinsini esibucayi, esingaholela ekutheni isifo sezinso nenhliziyo nesifo sohlangothi.
- Izimagqabhagqabha ezimhlophe ziyisibonakaliso sesixwayiso se-candidiasis yomlomo, umlomo owomile nomdlavuza womlomo.
Bheka udokotela wamazinyo wakho ngokushesha ukuze uthole ukwelashwa.
Amathegi ezempilo, udokotela wamazinyo, zezempilo, impilo yomlomo, Smile, amazinyo
Ongakwenzela amazinyo engane yakho
Usuku lokuthumela 8 uJan 2022
Kunezinto eziningana ongazenza ukusiza ukugcina amazinyo engane yakho enempilo enhle.
- Ezinganeni ezincane ezineminyaka engu-0-3 zisebenzisa inani elilingana nelayisi lomuthi wokuxubha ukuhlanza amazinyo. Izingane ezindala kufanele zisebenzise inani elilingana nepea.
- I-fluoride ivimbela izimbotshana ngokuqinisa uqweqwe lwawo. Kungakuhle usebenzise umuthi wokuxubha we-fluoride futhi uqinisekise ukuthi ingane yakho iphuza amanzi ane-fluoridated.
- Kwethulwa ukuhlolwa kwamazinyo njengoba amazinyo engane yakho eza ngokusebenzisa kubeka iphethini elihle lempilo.
"Ingane yakho ingavele ifunde ukuthanda udokotela wamazinyo, yenze kube lula ukuvakasha emgwaqeni kunanini ngaphambili."
Funda udaba oluphelele lapha: https://www.huffingtonpost.com/entry/dental-health-tips-for-kids-help-your-childs-smile_us_5a19667de4b0bf1467a846b8
Amazinyo Amhlophe IKapa laseNingizimu Afrika
Usuku lokuthumela 3 uJan 2022
Uma ufuna udokotela wamazinyo ozokwenza mhlophe kahle amazinyo akho eKapa kungani unganiki u-OptiSmile ucingo lokuba mhlophe amazinyo akho futhi umomotheka ngokuzethemba
Khululeka ngenkathi ochwepheshe bethu abanolwazi benza mhlophe amazinyo akho ehoreni esihlalweni samazinyo - ngemiphumela eqinisekisiwe
Ngokwenza kahle mhlophe amazinyo akho ekhaya usebenzisa iphakethe lamathileyi mhlophe ayi-10
I-OptiSmile isebenzisa imikhiqizo engenabuhlungu, esezingeni eliphakeme ukwenza mhlophe ukumamatheka kwakho.
Ukunikeza ngomuzwa okhululekile, okhululekile futhi onakekelayo
YENZA KAKHULU ISIMOMO SAKHO
Amazinyo amhlophe akusiza ubukeke umncane futhi unempilo. IMvelo + uhlelo lokumhlophe olungenabuhlungu futhi olusebenzayo, olunendlela yonke yemvelo, ezobuyisela ukumamatheka kwakho kobusha. Ezandleni zobuchwepheshe be-OptiSmile, i-NATURAL + ikunikeza amazinyo amhlophe ngehora - okuqinisekisiwe.
I-Opalescence Go yisixazululo esiphelele sokuthinta iziguli ezifuna ukwenziwa mhlophe okulula, okulungele ukwenziwa. Ijeli elisebenza mhlophe elihlinzekwa ngamathileyi agcwalisiwe, alahlwayo, i-Opalescence Go ingaletha imiphumela emangalisayo ngemizuzu eyi-15 kuphela ngosuku.
Ifoni: 087 702 6886
Ingabe Igazi Lijwayelekile Lapho Ugoqa?
Usuku lokuthumela 1 uJan 2022
Ungase ukhathazeke uma ubona igazi elincane lapho uphonsa. Yize lokhu kungaba yinto ejwayelekile ngokuphelele, kungaba nezinye izimo lapho igazi lisayina inkinga ebucayi ngamazinyo noma ngezinsini zakho. Uthini udokotela wamazinyo ojwayelekile?
- Labo abasanda kuqala ukuphosa bangaqale bacasule izinsini zabo.
- Ukushaya ngokungafanele kungadala ukuthi izinsini zakho zophe.
- Kungcono ukugoqa ubheke phezulu (phezulu naphansi) ngokungafani necala nohlangothi.
“Akufanele wophe uma ufloss ngaphandle uma kungokokuqala ukuthi uflossisa esikhathini eside. ”
Ukunakekela Ibhuloho Lakho Lamazinyo
Usuku lokuthumela I-31 Dec 2021
Ibhuloho lamazinyo lingahlala ngaphezu kweminyaka eyishumi uma ulinakekela - nazi izeluleko ezimbalwa zokukusiza.
- Gwema amaswidi namafinyela anzima kakhulu ngoba lokhu kungalimaza ibhuloho lakho.
- Hlanza bese uphonsa amazinyo akho nebhuloho kahle.
- Bheka udokotela wamazinyo wakho ukuze uhlolwe njalo ngamazinyo futhi uhlanzeke kahle.
Ukunakekela ibhuloho lakho namazinyo azungezile kuzosiza ekugcineni ibhuloho liphilile futhi kuvimbele izifo zezinsini.
"Ukubola kwamazinyo ngaphansi kwemiqhele ebambe ibhuloho lamazinyo kungenye yezinkinga ezivame kakhulu ezihambisana namabhuloho amazinyo."
Yimaphi Amachashazi Amhlophe Ezinsinini Zakho?
Usuku lokuthumela I-21 Dec 2021
Amachashazi amhlophe ezinsinini angaba uphawu lwezinkinga ezibucayi njenge-leukoplakia. Uma unezimagqabhagqabha ezimhlophe, vakashela udokotela wamazinyo ukuze uhlolwe, uxilongwe kanye nokwelashwa. Nakhu okunye.
- Izilonda zamankankane, i-leukoplakia kagwayi, isimo somzimba sokuzivikela komzimba, isilonda somlomo (ukutheleleka kweCandida), nomdlavuza womlomo konke kuvela njengamabala amhlophe.
- Izimpawu ezihambisana nazo zifaka ukopha, ukuzwela, izilonda ezivulekile, ukuvuvukala, ukuzwa okunjengokotini, ukuqhekeka, ubomvu nokuthanda izinto zensimbi.
- Ukuhlolwa kwegazi, i-biopsy nokutadisha umlando wezokwelapha kuzosiza ekuxilongweni.
Sicela uhlanze amazinyo akho kabili nsuku zonke bese uvakashela udokotela wamazinyo ukuyohlolwa.
Yini Engakwazi Ukufaka Izimila Zakho Zamazinyo?
Usuku lokuthumela I-14 Dec 2021
Ngabe izimpande zakho zamazinyo zingaphuka noma ziphule? Iningi leziguli libuza udokotela wamazinyo ukuthi ngabe ukufakelwa kwamazinyo kungaphila impilo yonke. Nakhu okungakwazi ukusika noma ukuphula okufakile kwakho.
- Ukugaya amazinyo, ukuwa nokuhlafuna izinto ezifana namathoyizi, amapeni nezipikili kungaphula noma kuqhekeze okufakelwa kwamazinyo.
- Uma umqhele wakho wephukile, phuthuma kudokotela wamazinyo ukuze ulungiswe noma kufakwe omusha.
- Gada amazinyo akho kanye nokufakelwa kwamazinyo ngokugqoka umlomo wokulala nemisebenzi yezemidlalo.
Bona udokotela wamazinyo wakho njalo ukuze ulandele.
Iseluleko Sabazali Lapho Ingane Ilimaza Izinyo
Usuku lokuthumela I-9 Dec 2021
Izingane ezinamazinyo abantu abadala zivame ukuhlangabezana nezinkinga uma zonakaliswe ngengozi. Njengomzali, kungumsebenzi wakho ukwazi ukuthi wenzeni emcimbini onjalo. Sihlanganise uhlu olusheshayo lokubonisana uma kunesidingo.
- Gcina wazi ukuthi unehora elilodwa ngaphambi kokuba izinzwa ngaphakathi kwezinyo ziqale ukufa.
- Uma izinyo likhishwe mahhala, lihlanze kahle.
- Faka izinyo ngobumnene ngaphambi kokuya kudokotela wamazinyo.
"Uma ingane yakho iphuka noma ikhipha izinyo, shayela udokotela wamazinyo esikhundleni somnyango ophuthumayo."
Chofoza lesi sixhumanisi ukuthola izeluleko ezengeziwe:
Usuku oluhle lwesibhakela
Usuku lokuthumela 16 Nov 2021
Indlela Yokuthuthukisa Ukubukeka Kokumomotheka Kwakho
Usuku lokuthumela 12 Nov 2021
Ukumamatheka kwakho kuyinto yokuqala abantu abayiqaphelayo ngawe. Ngenkathi ukumamatheka okunempilo nokumhlophe kukhulisa ukuzethemba kwakho, amazinyo akhanyayo noma aphukile abangela izingqinamba zokuzethemba.
Ngakho-ke, ungakuthuthukisa kanjani ukumamatheka kwakho?
- Buza udokotela wakho wamazinyo ukuthi afake okugcwaliswe ngesiliva ngokugcwaliswa okumhlophe.
- Thola ukufakelwa kwamazinyo ngamazinyo alahlekile.
- Gqoka izinsimbi zokuqondisa amazinyo agwegwile noma angaqondanga kahle
- Jika wenze mhlophe amazinyo ukuze ususe amabala (futhi ugweme ikhofi, iwayini elibomvu netiye).
Xhumana nodokotela wamazinyo ngezinqubo zamazinyo ezimonyo ukuze uvale izikhala, amazinyo agwegwile nezimbobo.
Isifuba Somoya Esixhunyaniswe Nezifo Zezinsini
Usuku lokuthumela 9 Nov 2021
Ucwaningo lwakamuva luphethe ngokuthi abahlushwa yisifuba somoya cishe babenamathuba acishe abe ngama-20% okuba ne-periodontitis, noma isifo sezinsini, uma kuqhathaniswa nalabo abangenaso lesi sifo.
Abahlushwa yisifo se-asthma bayelulekwa ukuthi banakekele ngokweqile ngempilo yomlomo futhi bazi izimpawu ezingaba khona zesifo sezinsini ezinjengalezi:
- Umlomo owomile
- Impumulo eminyene
- Izinsini ezibomvu noma ezivuthayo
Abahlushwa yisifuba somoya kufanele baxubha futhi bavule amazinyo ngendlela efanele futhi bavakashele udokotela wamazinyo njalo ukuthola isifo sezinsini ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kufanele ngaso sonke isikhathi “baqaphele impilo yabo yomlomo”Futhi izeluleko ezengeziwe zingatholakala ku- https://lerablog.org/health/services/study-links-asthma-with-increased-risk-of-gum-disease/.
Ukulungiswa Kwe-Caffeine Yakho kanye Nomphumela Wako Ekumomotheka Kwakho - Lezi Zeluleko Zingasiza
Usuku lokuthumela 5 Nov 2021
Iningi labantu lijabulela inkomishi yekhofi esanda ukwenziwa ekuseni. Ingxube enganeliseki yokunambitheka okujulile, ecebile nokulungiswa kwe-caffeine ivame ukukulungiselela usuku - kepha nayo inezowa.
Yebo, ikhofi liyamangalisa, kepha linomsoco futhi liqukethe ama-tannins - ngakho-ke ngenkathi uphuza, i-asidi inciphisa izinyo lakho lozinyo bese ama-tannin angena emifantwini futhi angcolise amazinyo akho. Kubi kakhulu uma uyithanda imnandi, ngoba amagciwane ayingozi azondla ngoshukela ongeziwe futhi akhuthaze ukubola!
Kepha ungesabi - ngalezi zinyathelo ezisheshayo, ezilula ungavikela amazinyo akho ngenkathi ujabulela ongikhethayo:
Phuza up! Ukufaka inkomishi yakho ekuseni kungazwakala kuyinto yasezulwini, kepha kunika i-asidi, ushukela namathanini isikhathi esithe xaxa sokubhubhisa amazinyo akho. Kungcono kakhulu ukujabulela indebe egcwele lapha nalaphaya.
Hlanza bese uphinda. Uma uphuza ikhofi eningi, yenza umzamo wokugeza umlomo wakho njalo emva kwengxenye yenkomishi oyiphuzayo. Lokhu kunciphisa i-asidi emlonyeni bese kukhukhula amanye ama-tannins.
Unobisi? Ukhilimu osebisini uzobopha ama-tannin asekhofi lakho ukuze anganamatheli emazinyweni akho nakumabala - i-creamier ibe ngcono, ngakho-ke khetha ukhilimu ogcwele noma okungenani ubisi olunamafutha amancane.
Yilinde… inkomishi ye-joe ene-esidi izokwenza izinyo loqweqwe lwakho lusengozini enkulu yokulimala, ngakho-ke zama ukulinda okungenani ihora ngaphambi kokuba udle ukuvimbela imihuzuko ekudleni okunzima, okunamafutha.
Munch futhi ziwe! Ukudla izithelo nemifino enoshukela, njengezinqathe, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi nama-apula, ngemuva kwekhabethe elihle kuzonikeza amazinyo akho ipholishi emfushane, emnene futhi kususe amanye ama-tanini.
Le mikhuba izokusiza ukujabulela isiphuzo sakho osithandayo esifudumele, ngenkathi ivikela kakhulu amazinyo akho futhi igweme ukulimala. Ayikho indlela yokuvikela ngokuphelele amazinyo akho kweminye imiphumela emibi yekhofi nokho, ngakho-ke qiniseka ukuthi uhlela ama-aphoyintimenti ejwayelekile endaweni yethu umkhuba wamazinyo eSea Point ngakho-ke singabheka amazinyo akho futhi siqiniseke ukuthi akhanyayo futhi anempilo. Uma ukushintsha kombala kuthinta indlela ozizwa ngayo ngokumamatheka kwakho, sishayele. Mhlophe amazinyo ochwepheshe ingakusindisa ukumamatheka kwakho.
Izeluleko Zokumamatheka Zisiza Ukuzuza Amazinyo Amahle Okubukeka
Usuku lokuthumela 27 Oct 2021
Ukuba namazinyo amahle abukeka ekwenza ufune ukumamatheka kulula kunokuba ucabanga!
Ukunakekelwa okuhle ngomlomo:
Okokuqala, inhlanzeko yomlomo enhle kubalulekile. Umlomo ohlanzekile futhi ophilile uhlala ukhanga kakhulu… .hhayi wena kuphela kepha nalabo abaseduze kwakho. Ukuxubha kabili ngosuku, ukuqhakaza kanye ngosuku nokuhlanzeka njalo ngomlomo nokuhlolwa kwamazinyo konke kusiza ekuqinisekiseni umlomo ophilile futhi nakanjani kuyasiza ekufezeni umzimba onempilo.
Impilo yomlomo iza njalo kuqala, ngakho-ke noma yimuphi umsebenzi wezimonyo kufanele uhlale emuva kuze kungabe kusaba nokutheleleka emlonyeni wakho, njengokubola noma izinsini ezivuthayo / ezinegciwane.
Ukuxubha ulimi lwakho futhi kuyinto edinga ukwenziwa kabili ngosuku, futhi kunezinto ezinkulu ezisusa izilimi emakethe ukukusiza ulawule amabhaktheriya kanye nemfucumfucu engakwazi ukuqoqa futhi idale umoya onukayo.
Usamu / Ukuhlafuna ushingamu:
Phuza amanzi amaningi futhi uhlafune ushukela mahhala, mhlawumbe xylitol ukuhlafuna izinsini ikakhulukazi ngemuva kokudla okunoshukela omningi noshukela wemvelo isib. ikhofi, uphayinaphu, ulamula, izivini, izithelo. Hlafuna kuphela kuze kuphele ukunambitheka, ngokwanele ukushukumisa amathe nokunciphisa i-pH emlonyeni.
Ungalokothi ibhulashi ngokushesha ngemuva kokudla noma ukuphuza noma yini ene-asidi ephezulu noma ushukela njengoba kubangela ukuguguleka kwamakhemikhali ebusweni bamazinyo futhi ungaxubha koqweqwe lwawo kalula ngale ndlela.
Ukudla kwasekuseni yisikhathi esibi kakhulu njengoba sihlala sigijimela ukuxubha futhi siqonde emsebenzini. Kunalokho shayela kuqala, bese usebenzisa i-mouthwash enhle ngemuva kokudla kwasekuseni bese uya emsebenzini, noma linda imizuzu engama-30 bese uxubha.
Uma kuziwa ukwenza mhlophe amazinyo akho, khuluma njalo nesazi sakho samazinyo. Imikhiqizo emhlophe ekhawuntareni ingaba ne-esidi kakhulu futhi ibe nolaka, kuyilapho iningi labachwepheshe elisetshenziswa ngokuya ngemiyalo yakho yezempilo noma yamazinyo kungeke kulimaze amazinyo noma izinsini.
Ukuphuza amazinyo nokugeza umlomo kungasusa amabala angaphezulu kuphela kodwa ukwenza mhlophe okuchwepheshile, okwaziwa njengokhipha ibala, kushintshe umbala wangaphakathi wamazinyo, kukunikeze ukumamatheka okuhle okumhlophe okwenziwe ngokhakhayi. Umlomo ngamunye unamandla okwenza mhlophe okwehlukile futhi awukwazi ukumane ukhethe umbala ongathanda ukuba amazinyo akho abe ngawo.
Udokotela wakho wamazinyo kufanele akwazi ukukuqondisa lapha, kepha uma kukhanya ebumnyameni, khanyisa amazinyo wohlobo lomhubhe omnyama owafunayo, lapho-ke ungakuthola lokho kuphela ngemiqhele nezindwangu.
Ukushintsha okudala nokwakhanyayo ukugcwaliswa kulula futhi kunalokho ucabanga. Xoxa ngokwenza lokhu ngemuva kokwenza mhlophe ukuze bakwazi ukuwafanisa nokumamatheka kwakho okusha okukhanyayo.
Ukulungisa amazinyo agqagqene / aminyene futhi kusiza ukuthuthukisa indlela omamatheka ngayo, indlela okwazi ngayo ukuyihlanza, futhi nakanjani kusindisa amazinyo ekugqokeni okungadingekile emazinyweni aphikisanayo ngenxa yokulunywa okungalungile.
Lokhu kungenziwa kusetshenziswa ama-brace, noma indlela elula ekhanga kakhulu kuzo zonke izindlela zokuphila ezimatasa, Invisalign. Lokhu okwedlule kuchungechunge lokuqondanisa okucacile okufana namathileyi aqinile, agqokwa cishe amahora angama-20-22 ngosuku izinyanga ezingama-6-12 ukuthola imiphumela emangalisayo.
Sinikeza Ukubonisana MAHHALA okungabonakali noDkt Smeyatsky ngoMsombuluko nangoLwesithathu, ngakho-ke fonela abemukelayo ku-087 702 6886 bese ubhuka indawo yakho yamahhala ukuze ubone ukuthi yini angayenza ukuze umomotheke. Funda ngaphezulu lapha: www.optismile.co.za/dental-solutions/invisalign/
U-Emma King, wethu Amazinyo Ama-Whitening ongoti baphinde banikeze ngemizuzu engama-20 yokubonisana MAHHALA ukuze ubheke amazinyo akho kanye nezinsini bese wenza uhlelo lokuba mhlophe ukuze luvumelane wena namazinyo akho.
Izimila kube ngumsindisi wokuphila kwabantu abaningi kakhulu abalahlekelwe ngamazinyo ngezizathu ezahlukahlukene. Kwezinye izimo, ukufakelwa kosuku olufanayo kungenzeka, kepha iningi lidinga ama-aphoyintimenti ambalwa ngisho nomsebenzi omncane wamathambo.
Sino-periodontist omuhle, uDkt Feheem Bhamjee ongakusiza ngamazinyo alahlekile ngamanye, amacala okugcwala umlomo ngokugcwele, nokuningi.
Angiphinde amazinyo okufakelwa akhululekile nokudla okunomkhawulo! Ukukwazi ukuhlafuna ukudla kwakho ngokufanele nakho kuyingxenye ebalulekile yempilo yakho yonke, ngakho-ke akuhlali nje kumayelana nobuhle. Funda kabanzi lapha: www.optismile.co.za/dental-problems/missingteeth/
Izindebe zezindebe siza ukuvimbela izindebe zakho ekuqhekekeni futhi wakhe ifreyimu enhle enempilo ezungeze amazinyo akho. Ngibathanda ngokuphelele abemvelo abanjengoBurt Bees, kanye ne-Aloe neTea tree ones.
Bheka i-Takelot ne Uthembekile Emvelweni. Ngaphandle kwalokho, iBlistex kufanele ibe nento ethile esikhwameni sakho, emotweni noma ekhabetheni ledeski lehhovisi! Ungathenga iBlistex ngokuchofoza.
Uma ucabanga ngoshintsho olungcono lokumamatheka lapho kungcono kakhulu ukuhlanganisa ukwelashwa kwakho konke nalokho odokotela bakho bamazinyo nabokuhlinzeka ngomlomo okufanele bakunikeze. Kwa-Optismile sisebenza ndawonye njengeqembu, futhi sihlala sazi ukuthi abanye odokotela benzani njengoba sihlela ukwelashwa kwethu ndawonye.
Ukuhlanzeka ngomlomo / umsebenzi wamazinyo:
Ukuhlanzeka ngomlomo nokwenza mhlophe kuhlelwe kuqala futhi kwenziwa noma yimuphi umsebenzi wamazinyo uma umbala usuzinzile, kepha ukuhlola amazinyo okuphelele nge-X-ray nezithombe kuyadingeka ngaphambi kokuqalisa noma yiluphi uhambo lwamazinyo. Udinga ukulinda okungenani amasonto ama-2 phakathi kwe-bleaching nokuhlanganiswa kwanoma yikuphi ukugcwaliswa okusha.
Ukuqinisekisa ukuthi uzinika isizathu sokufuna ukumamatheka nsuku zonke nakho kubalulekile. Cabanga ngezinto ezikuthokozisayo futhi uqhubeke uzenza. Kunohlangothi oluthile lwengqondo kulokhu okungafanele lunganakwa noma lubukelwe phansi.
Zizungeze ngabangane abahle nomndeni onothando futhi uqiniseke ukuthi uhamba ukuze ujabulele izinto ezibaluleke kakhulu empilweni. Kubantu abaningi, ukumamatheka kuyinto yokuqala abayiqaphelayo lapho behlangana nomuntu okokuqala ngqa.
Uma ufuna ukumamatheka kwakho kube isici sakho esibaluleke kakhulu, sishayele 087 7026886 bese ubhuka ukubonisana namuhla.
Usuku lokuthumela 26 Oct 2021
Abazali bami banamazinyo amabi - ngabe lokhu kuzongithinta?
Usuku lokuthumela 20 Oct 2021
Uma abazali bakho benamazinyo agwegwile noma aminyene, khona-ke kunethuba eliqinile lokuthi uzuze njengefa lezi zimfanelo (ngaphandle kokuthi umunce isithupha sakho, ngoba lokho kungadala namazinyo agwegwile).
- Uma abazali bakho benempilo ebuthakathaka yamazinyo ungahle ube nengozi enkulu yokuba nezinkinga ngokuzayo.
- Ukunakekelwa okwengeziwe nokunakwa kufanele kuthathwe lapho uhlanza amazinyo akho.
- Udokotela wamazinyo wakho angakwazisa ngezinketho zokuthuthukisa impilo yakho yamazinyo.
“Wena wedwa unesibopho sokunakekelwa ngomlomo, ngakho-ke yenza umsebenzi ongcono kakhulu
lapho uhlanza amazinyo akho! ”
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/are-orthodontic-issues-hereditary/
Yini Engadala Izinyo Eliphukile?
Usuku lokuthumela 16 Oct 2021
Izinyo eliqhekekile lingadalwa yizinto eziningi njengokugaya, ukuhlukumezeka noma ukuluma entweni enzima kakhulu. Ukuqhekeka kungama mpo, bese kwehla kubude bezinyo, kuhlukanise izinyo uma kungalashwa.
Ukuqhekeka kwezinwele noma ukuqhuma kungukuqhekeka okuncane koqweqwe lwamazinyo ngokuvamile okungenabungozi. I-cusp eqhekekile izobangela ubuhlungu noma ukuzwela ekulungeni futhi ingaphuka uma ishiywe.
Ezimweni ezimnene ukuzwela okuvela emifantwini kungalashwa kusuka ekugcobeni okugcotshwa kwamazinyo okwehlisa imichilo nsuku zonke, noma ukuba nodokotela wakho wamazinyo afake ungqimba lwe-varnish ngaphezulu komfantu ukuze aluvale. Ezimweni ezinzima kakhulu, ukugcwaliswa, imisele yezimpande nemiqhele kuyadingeka. Iziguli ezinezinkinga ezinkulu zokugaya zizodinga ukulungisa amazinyo bese zinezitsha zokuluma ezenziwe ukuvikela ukuluma / amazinyo ngesikhathi sasebusuku lapho isiguli sithambekele kakhulu ekugayeni nasekucingeni.
Abantu abaningi abazi nokuthi banamazinyo aqhekekile!
Udokotela Wamazinyo Wezimonyo Udokotela Wamazinyo Sea Point
I-Invisalign - Isixazululo Esilula Kakhulu Sokwelapha
Usuku lokuthumela 8 Oct 2021
Kwakukade kukholakala ukuthi izinsimbi ezinikela ngensimbi engakwesokunxele zinikeza isisombululo unomphela emazinyweni agobile nokuthi izinyanga ezimbalwa zomhlatshelo zizohumushela ekumoyizeleni okuqonde ngokuphelele impilo - kepha iminyaka ucwaningo nophenyo ngikhombisile ukuthi empeleni akunjalo. Okuwukuphela kwendlela yokugcina imiphumela etholwe ngabakaki ukugqoka abagcini bokugcina ngemuva kokuthi ama-brace esusiwe.
Kungenzeka uye waqaphela ukuthi amazinyo akho ayahamba, aba yigwegwe lapho ayeqonde khona. Lokhu kujwayelekile futhi kungokwemvelo uma ungagqokanga okugcina kwakho - ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi amazinyo ahamba impilo yonke futhi azoqhubeka nokufuduka ngaphandle kokuthi kuthathwe izinyathelo zokuvimbela ngemuva kokuba kususwe izinsimbi.
Izindaba ezimbi ukuthi uma amazinyo akho ehambile, futhi ungasenakho lokho kumamatheka okuqonde ngqo, kuzodingeka uphinde welashwe futhi. Kungahle kungabonakali kukufanele - mhlawumbe ucabanga nje ngokuhlala nokusinekile - kepha amazinyo agwegwile akhuthaza izingqinamba zesakhiwo ezingaba nomthelela omkhulu empilweni yakho ngokuya phansi komugqa ukuze ukwelashwa kabusha kunganconyelwa nje, kuyadingeka ukuqinisekisa impilo yomlomo yesikhathi eside.
Izindaba ezimnandi ukuthi ukuphinda ulaphe amazinyo ayisigwegwe akuseyona inkinga enkulu obekukhona, futhi manje kungenziwa ngokushesha nangokuqonda ukuze kube nomthelela omncane empilweni yakho futhi akekho noyedwa owake adinga ukwazi ukuthi uyaqhubeka ukwelashwa.
I-Invisalign kungenye indlela enhle kakhulu yezinsimbi zensimbi ezi-chunky, ezingaba nzima kakhulu. Ziyi-aligners ecacile elingana namazinyo akho emvelo bese uzihambisa kancane kancane. Nge I-Invisalign, ukubuyela emuva okuncane kungalungiswa zingakapheli izinyanga ezi-3 - 6, futhi ama-aligner angasuswa ngokuthanda ngezikhathi ezithile ezifana nemihlangano yebhizinisi noma imicimbi ukuze ube nenkululeko yokuphila impilo yakho ngaphandle kwemikhawulo.
UDkt Harris Smeyatsky ungomunye wabahlinzeki bePlatinamu abangama-2 abangabonisi eNingizimu Afrika, futhi nguyena kuphela otholakala eKapa ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi usesandleni esihle. Udokotela uthola isimo sePlatinamu ngokwelapha phakathi kweziguli ezingama-41 nezingama-80 esikhathini esiyizinyanga eziyi-12, okusho ukuthi uDkt Smeyatsky unolwazi olunzulu ngohlelo lwe-Invisalign futhi angakusiza hhayi ngenqubo yokuqondisa nje kuphela, kodwa nangokunakekelwa kwesikhathi eside imiphumela yakho.
Uma ulinda isikhathi eside ukuthi uphinde uphathwe amazinyo, kuzoba kubi kakhulu. Ngakho-ke luma inhlamvu bese wenza leyo kholi namuhla - isimo sethu sePlatinum I-Invisalign umhlinzeki ulungele ukukusiza uphinde uthole ukumamatheka kwakho okumangazayo, okuqondile. Xhumana nathi namuhla bese uthola a ukubonisana kokuqala kwamahhala.
Umlomo Oomile: Okungaphezu Kokuhlangabezana Neso
Usuku lokuthumela 5 Oct 2021
Umlomo owomile awugculisi nje kuphela, kepha ungalimaza amazinyo nezinsini zethu ngokungenakulungiswa eminyakeni edlule. Yini ebangela lesi simo futhi kungani kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukufuna izeluleko kudokotela wamazinyo oqeqeshiwe?
- Ngaso sonke isikhathi phuza amanzi anele, ngoba ukungabi namanzi kuyimbangela eyinhloko.
- Ukuphuza kakhulu utshwala kungenye into ehamba phambili.
- Ukukhuluma nodokotela wamazinyo kuzosiza ukuvimbela izindaba ezengeziwe (nezimbi kakhulu).
"Ngaphezu kwalokhu, eminye imishanguzo yokungezwani komzimba nokungezwani komzimba efana nama-antihistamine kanye nama-decongestant kungadala ukuthi umlomo wakho uzwe womile."
Imigomo Yokulashwa Kwebhuloho Esekela Ukutshala
Usuku lokuthumela 4 Oct 2021
Uma uhlangabezana nezimo ezidingekayo, udokotela wamazinyo wakho angancoma ukwelashwa kwebhuloho okusekelwa endaweni yebhuloho elijwayelekile. Lapho ibhuloho elijwayelekile lisekelwa ngamazinyo azungezile, okufakelwa kwamazinyo kunikeza amandla engeziwe nokuvikeleka.
- Kufanele okungenani ube nezinyo elilodwa elilahlekile
- Kufanele kube khona ithambo lomhlathi elanele ukuxhasa ukufakelwa
- Kufanele ube nempilo enhle ngomlomo.
"Uma unesifo sezinsini noma olunye uhlobo lwesimo sempilo yomlomo, kuzodingeka ukuthi welashwe ngokuphelele ngaphambi kokuthi ubhekelwe le nqubo. "
Funda kabanzi mayelana nokuqokwa kokwelashwa kwebhuloho okusekelwa lapha https://yourdentalhealthresource.com/who-is-a-candidate-for-an-implant-supported-bridge/
Kuqhakanjiswa uDkt Smeyatsky
Usuku lokuthumela 2 Oct 2021
UDkt.Harris Smeyatsky waqala umsebenzi wakhe e-University of Witwatersrand eGoli ngo-1986 futhi wasebenza iminyaka emibili njengoDokotela Ohlinzayo Wamazinyo Emkhakheni Wezokuvikela waseNingizimu Afrika ngaphambi kokuthuthela e-United Kingdom ngo-2, lapho ayesebenza khona esikhungweni samazinyo esizimele waze wathutha waya eKapa wajoyina iqembu le-Optismile.
Ngesikhathi sakhe e-United Kingdom, uDkt Smeyatsky wayesiza iziguli ngemithi yokwelapha ngamazinyo - kubandakanya i-Invisalign. Sekukonke, uDkt.Smeyatsky welaphe iziguli ezingaphezu kwama-300 esebenzisa uhlelo lokungabonakali, futhi usanda kuzuza Isimo sePlatinamu njengoMsebenzi Ongabonakali - okusho ukuthi welashwa phakathi kweziguli ezingama-41 nezingama-80 esebenzisa i-Invisalign ezinyangeni eziyi-12 ezedlule kuphela.
UDkt Smeyatsky njengamanje ungomunye wabasebenza e-2 eNingizimu Afrika asebethole isikhundla sePlathinamu, futhi nguyena kuphela ongungoti eKapa owenza lesi silinganiso esihlonishwayo esivela e-Invisalign.
I-Invisalign ibuye yabona isipiliyoni sikaDkt.Smeyatsky ngabagcini beVivera, abasebenzisa ubuchwepheshe obufanayo beskena bokusetshenziswa kwedijithali obusetshenziselwa ukwenza i-Invisalign aligners futhi inikeze ukulingana okuqondile nokunethezeka kunabagcini abajwayelekile.
Ngakho konke akwenzile okumangazayo, uDkt Smeyatsky uhlala ezithobile, enobungane futhi ezimisele ukusiza iziguli zakhe ngezimo ezahlukahlukene zamazinyo nokwelashwa. Uletha ulwazi nesipiliyoni sakhe esikhulu kuzo zonke izimo azelapha, enikeza iziguli zakhe izindlela zokwelashwa ezingcono kakhulu ezikhona.
Izizathu zokuthi kungani ungahle uthole i-Cavity ngaphansi kokugcwaliswa
Ungase ucabange ukuthi ukugcwaliswa kugcina amazinyo akho evikelekile emigodini, kepha lokhu akuhlali kunjalo.
- Ukugcwaliswa okuqhekekile kwenza kube lula ukuthi amabhaktheriya akhe.
- Ukusebenzisa inqubo engalungile ukubeka ukugcwaliswa kungashiya izikhala ezigcina ziholele ekwakhekeni komgodi.
- Imikhuba efana nokugaya amazinyo ingalimaza ukugcwaliswa, kudale imifantu nezikhala.
Ukuqinisekisa ukuthi ukugcwaliswa kwakho kusesimweni esihle, vakashela udokotela wamazinyo wakho ukuthola ukuthi kudingeka yini ukuthi kufakwe okunye.
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/can-i-get-cavities-under-a-filling/
Ukubhekana Nokunambitheka Okubi Emlonyeni
Usuku lokuthumela 14 Septhemba 2021
Ukunambitheka okungafanele emlonyeni kuvame ukubangelwa izinkinga ezilapheka kalula futhi kungalapheka ngaphandle kokuvakashela udokotela wamazinyo. Uma inkinga ingenxa yezici ezilula ezifana nenhlanzeko yamazinyo emibi, imishanguzo, noma ukudla, khona-ke ikhambi lingaba lula njenge:
- Ukuxubha nokuxubha amazinyo kahle nangokujwayelekile
- Ukushintsha umuthi kepha ngaphansi kokuyalelwa ngudokotela
- Ukudla ngendlela enempilo ngenkathi ugwema ukudla neziphuzo ezinenkinga
Kwesinye isikhathi ukunambitheka okungapheli noma okungajwayelekile emlonyeni kungaba yisibonakaliso sokuqala kokubi kakhulu “Izindaba zezempilo nezimo zokwelashwa”Futhi kufanele kuxoxwe nodokotela wamazinyo ozohlola inkinga.
Bhuka i-aphoyintimenti ne-periodontist yethu
Ungathola okuningi ku-https: //www.medicalnewstoday.com/articles/321438.php.
Ingabe Udokotela Wamazinyo Angangisiza Nge-Apnea Yokulala?
Usuku lokuthumela 5 Septhemba 2021
Abantu abasola ukuthi kungenzeka ukuthi bane-apnea yokulala bangazuza ngokuvakashelwa odokotela babo bamazinyo.
- Odokotela bamazinyo bangabona kalula izimpawu ezivamile zokuphefumula ubuthongo, njengomlomo owomile noma ukulimala kwamazinyo.
- Udokotela wamazinyo futhi angakudlulisela kuchwepheshe wokulala ukuze kuqinisekiswe ukuxilongwa.
- Odokotela bamazinyo bangakunikeza ukwelashwa kokusebenzisa ngomlomo, okusiza ukugcina imigwaqo yomoya ivulekile ngenkathi ulele.
Umlayezo wokugcina wokuthatha: ungalibali ukwenza lokho kubekwa kwamazinyo, ngoba impilo yakho isengozini.
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/how-does-a-dentist-diagnose-sleep-apnea/
Amazinyo wezimonyo alungisa amazinyo alimele yi-acid reflux
Usuku lokuthumela 2 Septhemba 2021
I-Acid reflux yaziwa kwezokwelapha njengesifo se-reflux se-gastroesophageal (GERD), futhi ingaqeda koqweqwe lwawo. Lokhu kuvame ukuholela emazinyweni aqhephukile nawabala. Manje usungalungisa futhi ubuyisele ukumamatheka kwakho okonakele ngokusebenzisa amazinyo wezimonyo.
- Izindwangu ze-porcelain zingamagobolondo amancane e-ceramic ukumboza amazinyo aqhekekile, aqhephukile nawabala.
- Ukubopha amazinyo kungenye indlela yokumboza ukungapheleli emazinyweni.
- Imiqhele yamazinyo ibuyisela ukusebenza, ukuma, nokubukeka kwamazinyo.
Thola i-acid reflux yakho elashwa ukuze ugweme ukulimala okuqhubekayo.
http://yourdentalhealthresource.com/ine-gerd-acid-reflux-eroded-ukumamatheka kwakho-kwezimonyo-amazinyo-usizo /
Okubandakanya Ukuhlinzwa Kwesikhashana
Usuku lokuthumela 1 Septhemba 2021
Iziguli ezinesifo sezinsini esezithuthuke ngaphezu kwe-gingivitis emnene zinezifo zesikhathi. Kubo, udokotela wamazinyo angancoma ukwelashwa nge-periodontal ukususa i-tartar efihlekile (ama-bacterial deposits), ukubuyisela impilo yezinsini, nokugcina amazinyo athintekile.
- Ama-Periodontists angodokotela bamazinyo abangochwepheshe abaphatha izinsini ezigulayo, ukuvuvukala nanoma yimuphi umphumela ovelayo.
- Isifo sezinsini kanye nokwakheka kwamagciwane kuyizimbangela ezibalulekile zokulahleka kwamazinyo.
- Ukuhlolwa njalo kwamazinyo kusiza ukunciphisa ubungozi bezinkinga zesikhathi.
Uma kungalashwa, i-periodontitis kanye nempendulo yokuvuvukala komzimba ngokwemvelo, kuzobhubhisa izicubu ezithambile kanye nethambo lomhlathi.
Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane. https://www.medicalnewstoday.com/articles/321168.php
Usuku lokuthumela 31 Aug 2021
Ufuna Udokotela Wamazinyo eSea Point? Ukhathele ukufihla ukumamatheka kwakho kwabanye? Ngifisa ukuthi ekugcineni wenze okuthile ngamazinyo akho akhanyayo, aqhekekile, noma alahlekile? Noma, ingabe umane ufuna ukwakha phezu kobuhle bakho bemvelo bomlomo?
Usesho lwakho luphelile! Idume Udokotela wamazinyo eSea Point, UDkt Clifford Yudelman ingakusiza uthole ukubukeka okufanelekile! Ngosizo lweqembu elinamakhono aphakeme e-Optismile, lo dokotela wamazinyo wase-Sea Point osuselwe kwezimonyo akajwayelekile ekudaleni ukumamatheka okuhle.
Ungaqiniseka ukuthi sizokunikeza insizakalo esezingeni ongathembela kuyo ngesikhathi sakho sokudinga. (Funda kabanzi mayelana ne- Izinsizakalo Zamazinyo Eziphuthumayo Lapha.)
Noma ngabe ufuna ukwakheka okuphelele kokumamatheka noma ukubheka okujwayelekile - ungaqiniseka ukuthi sizohamba imayela elengeziwe ukukwenza uzizwe ukhululekile. Siyaqonda ukuthi ukuya kudokotela wamazinyo kungaba yisikhathi esicindezelayo kwabanye abantu! Sihlose ukwenza umzamo omkhulu wokubeka ukukhathazeka kwakho empumalanga ukuze uzizwe ukhululeke ngokwengeziwe.
Kungani Usibheka Njengodokotela Wamazinyo Wendawo Yasolwandle Wakho
Ithimba lethu!&Nbsp;Odokotela Bamazinyo E-Sea Point
Sihlose ukujabulisa iziguli zethu! Funda ukuthi ezinye zeziguli zethu zithini lapha: Ukubuyekezwa kweziguli
Uzohlala uphathwa njengomndeni futhi sizoba khona lapho kwenzeka izimo eziphuthumayo.
Sisebenza ngokukhethekile Kwezamazinyo Okungenabuhlungu.
Kusukela ngesikhathi obeka ngaso unyawo lwethu Umkhuba wamazinyo, uzobona ukuzibophezela kwethu ekumoyizeleni kwakho. Kungumgomo wethu wokuqala ukulalela iziguli zethu, siziqonde ngokugcwele izidingo zakho nezinhloso zakho, bese sichaza ngokucacile nangokucacile ukuthi singasiza kanjani.
Uhlu lwemisebenzi enikezwe esikhungweni sethu samazinyo lungezansi:
Amakhanda wamazinyo namabhuloho
Ukuhlakanipha Amasu Ukususwa
Abagcini Bomlomo Abenziwe Ngokwezifiso
I-Endodontics (Umsuka We-Canal Therapy)
Uma unesifiso sokwenza ngcono unomphela ekumamatheka kwakho, sicela xhumana nomkhuba wethu namuhla. Ukusebenzela iziguli zaseSea Point naseKapa, ​​abasebenzi bethu abanolwazi bangaphendula imibuzo yakho futhi bakusize ukufeza ukubukeka obekulokhu kukudala ufuna.
Amathegi Udokotela Wamazinyo Wezimonyo, Udokotela Wamazinyo Sea Point
Amathiphu Wokuhlanza Amazinyo Akho Lapho Ugqoke Izinsimbi
Usuku lokuthumela 30 Aug 2021
Kwa-Optismile sisiza iziguli ngokuqondisa amazinyo nokubuyisa ukumamatheka. Kodwa-ke, kungaba yinselele ukuhlanza amazinyo akho lapho usezinsinini. Lokhu kwandisa ingozi yokuba isifo sezinsini, ukubola nokuphefumula kabi.
Sinikeza I-Invisalign Sula Aligners ukuthola imiphumela ngokushesha kunama-brace ajwayelekile. Ilungele abantu abadala nentsha efuna enye indlela, kepha sinikela ngokuhlanzwa kwenhlanzeko yomlomo kuzo zonke iziguli, kufaka phakathi lezo ezinezinsimbi.
Nawa amanye amathiphu wokuhlanza:
Vakashela umhlanzimlomo okungenani njalo emavikini ayisithupha kuya ezinyangeni ezi-6 kuya ngokuthi uphumelela kangakanani ekuhlanzeni izinsimbi eziyinsimbi. I-Superfloss evela ku-Oral B yiyona floss engcono kakhulu ongayisebenzisa nge-braces njengoba inesigaba esinzima ekugcineni komunye esetshenziselwa ukufaka i-floss ngaphansi kocingo naphakathi kwamazinyo.
Sinikeza zonke iziguli zethu ama-brace, ama-veneer, imiqhele, okufakelwa, amabhuloho, izinkinga ze-periodontal futhi nje kunzima ukufinyelela ezindaweni, i-Waterpik! Iningi leziguli zethu likwazi ukungezwani nokuthanjiswa kwe-flossing ngakho-ke iWaterpik ingaba lusizo cishe kuzo zonke iziguli noma kunjalo! Idizayini ye-ergonomic yeWaterpik yenza kube lula ukuyibamba nokuyisebenzisa. Bheka ku-www.waterpikflosser.co.za ukuthola izinhlobo ezahlukene ezitholakalayo. Idivayisi evuselelekayo ithandwa kakhulu futhi siyayithengisa ngezindleko!
Kuyihlazo elikhulu ukuchitha sonke isikhathi nemali sinezinsimbi kuphela ukuze sigcine sinezindawo ezingabukeki kahle ngamazinyo kanye nokubola nesifo sezinsini. Impilo yomlomo kufanele ize kuqala njalo.
Amabhulashi okuvala ngaphakathi ayamangalisa ngokuthwala nokusebenzisa emsebenzini ngemuva kwesidlo sasemini noma ukudla okulula. Sithanda amabhulashi we-Curaprox interdental. Ziza ngobukhulu obuhlukahlukene obuhlukahlukene futhi konke kulula ukuzibamba noma ngabe uneminyaka emingaki. Sihlala sinabo esitokweni!
Umuthi omkhulu wokuhlanza utshwala mahhala nakho kufanele ngokuphelele! Kukusiza ukuthi ufinyelele kubo bonke labo okunzima ukufinyelela ezindaweni ngaphandle kokubangela ukomisa emzimbeni emlonyeni ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kotshwala. Siyithanda ngokuphelele i-Philips Sonicare Breath Rx mouthwash, kanye ne-Gum / Butler Original mouthwash emhlophe etholakala kwa-Clicks / Dischem. Sihlala sinomshini wokugeza umlomo weBreath Rx kanye nomuthi wokuxubha esitokisini.
Sebenzisa umuthi wokuxubha onama-antibacterial agents kanye ne-fluoride. Kukhona amathuba okwanda kokuqongelelwa kwamacwecwe ngesikhathi sokubopha izinsimbi, ngakho-ke udinga usizo oluningi ukuvimbela ukubola ngangokunokwenzeka. Futhi, iBreath Rx iyindlela yethu yokuzikhethela yamazinyo.
Shayela kabili ngosuku ngebhulashi lamazinyo elenziwe ngezandla. Ngithola ukuthi ikhanda lincane kangcono ukuze ukwazi ukufinyelela ezindaweni ezingemuva kalula. Ama-brace asevele ethatha isikhala esikhulu impela, esikhawulela ngisho nangaphezulu. Ibhulashi lamazinyo lezingane liphelele. Shayela lapho izinsini zijoyina khona izinyo, i-engeli ebheke kubakaki ngamadigri angama-45, shayela ngqo kubakaki ngamadigri angama-90, futhi ekugcineni unyukele phezulu (noma phansi kuye ngokuthi yiluphi ukhonkolo) kubakaki. Ngakho-ke, kukho konke ukufakwa kwamabhulashi amane ngaphandle kuphela. Ungakhohlwa ukuxubha izindawo ezilumayo nengaphakathi lamazinyo eliseduze kolimi! Ngithola nokuthi amakhanda amabhulashi wamazinyo kagesi adidana ngokushesha okukhulu ngabakaki ukuze amabhulashi wezandla alula nje!
Ungayigweme i-Orthodontist yakho. Babone njengoba kunqunyiwe - nyangazonke noma ama-6 masonto onke noma lapho kunenkinga. Khumbula njalo ukuthi usavakashela udokotela wamazinyo wakho ojwayelekile ukuze ahlole kanye ngonyaka ngisho nangesikhathi sokubopha. Isazi sakho sokuhlanza ngomlomo singahlanza futhi udokotela wamazinyo angahlola ukuhamba kwamazinyo akho kepha futhi awenzi isheke elizinikele lokubhoboza izimbobo.
Amathegi ezempilo, udokotela wamazinyo, impilo yomlomo, amazinyo
Kuyini ukuXhunyelelwa kweGum?
Usuku lokuthumela 24 Aug 2021
Ezimweni ezinzima zezifo zezinsini kuyehla futhi izimpande zamazinyo zivezwe zibenze babe sengozini futhi bazwele. Ukulandela ukwelashwa kwesifo sezinsini, kungadingeka ukufakelwa izinsini ukumboza lezi zimpande.
- Isifo sezinsini singavikeleka ngenhlanzeko efanele yomlomo ekhaya nokuhlanzwa kwamazinyo njalo.
- Izinsini ezisanda kwenziwa zenza amazinyo abukeke made futhi ulayini wezinsini awulingani.
- Izimpande ezidaluliwe zivame ukuba buhlungu kakhulu futhi zizwele.
Ukugwema isifo sezinsini, gcina imikhuba emihle yomlomo, udle ukudla okunempilo, futhi ubone udokotela wamazinyo njalo.
"Ngaphambi kokuthola ukufakelwa kwezinsini, udokotela wamazinyo uzohlola ukumamatheka kwakho bese ezama ukwelapha isifo sakho sezinsini ngaphandle kokuhlinzwa."
Amazinyo Obisi Anikeza Izinkomba ze-Autism
Usuku lokuthumela 14 Aug 2021
Ukuhlolwa okuningiliziwe kwamazinyo ezingane kukhanyise okusha ngezimpande nokuxilongwa kwe-autism.
- Ucwaningo lweSayensi lukhombisile ukuthi izingane zisebenzisa kanjani umsoco wezimbiwa ezimbili (i-zinc nethusi) ukuthi zingabikezela kanjani i-autism.
- Amazinga aphansi ethusi ne-zinc emazinyweni ezingane axhumene ne-autism.
- Kokubili i-autism ne-ADHD kungenzeka esikhathini esizayo zembulwe “emasongweni okukhula” emazinyweni ezingane.
Abaphenyi baphinde bahlela ukusebenzisa amazinyo ezingane ukuphenya imijikelezo yemetabolism yobuchopho, ukunakekelwa kokushoda kokukhathazeka (ADHD) nezimo ezihlobene.
Funda kabanzi ngalolu daba lapha: .html
Kwenzekani Ngemuva Kokuhlinzwa Kwezinyo Lokuhlakanipha?
Usuku lokuthumela 4 Aug 2021
Nazi izikhombisi ezimbalwa okufanele uzikhumbule kunoma ngubani osuswa ngamazinyo okuhlakanipha.
- Okunye ukuvuvukala, ukungaphatheki kahle nokulimala endaweni kulindeleke.
- Ungaphuza amaphilisi ezinhlungu ukusiza ngokungahambi kahle, noma yimuphi omunye umuthi onikezwe ngudokotela ohlinzayo wamazinyo.
- Imithungo iyasuswa evikini eli-1 ngemuva kokuhlinzwa, futhi ukuphulukiswa kufanele kuphele ngemuva kwamasonto amabili.
Udokotela wamazinyo uzokwazisa ngezindlela ezinhle kakhulu zokusheshisa inqubo yokutakula ngenkathi usekhaya.
Funda udaba oluphelele lapha: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321657.php
Ukuphefumula okubi kukuwisa?
Ukuphefumula kabi kungumbulali wangempela wokuzethemba. Akugcini nje ngokuba namahloni, kodwa futhi kuthinta kabi nobudlelwano bakho bomuntu siqu nobungcweti, futhi kubangela ukungezwani komphakathi okungagwemeka kalula.
Izindaba ezimnandi ukuthi umoya onukayo ungagwenywa, kepha konke kwehla ekuboneni kahle ukuthi kubangelwa yini. Imvamisa uzothola ukuthi kubangelwa ukumbozwa kwamagciwane abangela iphunga ngemuva kolimi, kepha kungabhebhetheka ngokudla okuthile, ukunakekelwa kwezempilo ngomlomo, ukuhlanzwa okungafanele kwamazinyo okufakelwa, isifo sePeriodontal noma iXerostomia (umlomo owomile ).
Noma ngabe yini ebanga le nkinga ehlazisayo, qiniseka ukuthi ngokungangabazeki kukhona isixazululo nokuthi sizokusiza ukuthi usithole. Bheka amathiphu womoya omusha ka-OptiSmile, shayela nathi noma ume ngomkhuba wethu omusha sha esitezi sesithathu sePoint Mall eRegent Road, eSea Point. Abahlanzayo bamazinyo bazokususa umoya (omubi))
Okokuqala, lawula inkinga. Cela ilungu lomndeni ukuthi likutshele noma kunini uma unephunga elibi lomlomo noma cha.
Hlanza ulimi lwakho ngesineke ngokususa ulimi.
Shayela kabili nsuku zonke.
I-Floss nsuku zonke noma usebenzise amabhulashi angaphakathi.
Hlanza amazinyo akho ngezikhathi ezithile ngochwepheshe bethu bamazinyo ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinsini zakho azopha kalula nokuthi asikho isifo se-gingivitis noma se-periodontal gum disease.
Yidla imifino enemicu efana nezanqante nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Lokhu kusiza ekugcineni ulimi luhlanzekile.
Hlanza umlomo wakho ngemuva kokudla nokuphuza amaprotheni, afana nemikhiqizo yobisi, inhlanzi nenyama. Amagciwane olimini lwakho adiliza amaprotheni ukukhiqiza (okunukayo) isibabule. Ukuhlafuna ushingamu wamahhala kuyasiza lapho ungakwazi ukuxubha.
Phuza iziphuzo eziningi, ikakhulukazi amanzi, kodwa qaphela ukuthi ukuphuza kakhulu ikhofi kungenza isimo sibe sibi kakhulu.
Uma ugqoka amazinyo okufakelwa, kubalulekile ukuwahlanza kahle ngebhulashi lokufakelwa bese uwagcobisa ubusuku bonke kusisombululo se-antiseptic njengoba kunconyelwe uchwepheshe wakho wamazinyo.
Uma uhlushwa ngumlomo owomile, ukumbozwa kolimi lwakho kuzoba kubi kakhulu, kwandise amathuba okuphefumula kabi. Xoxa nodokotela wakho ukuze ubone ukuthi umuthi wakho uyimbangela yeXerostomia yakho.
Ukudonswa kwangemuva kwamakhala ngenxa yokungezwani komzimba noma ukugula nakho kuzokwenza ukuphefumula kwakho kube kubi kakhulu, njengoba amaprotheni aqhubekayo amafinyila edilizwa yizingubo zolimi, ezikhipha isibabule. Futhi, xoxa nodokotela wakho mayelana nokuthi ngabe imithi yakho ingadala lokhu.
Uma iphunga livela emakhaleni akho hhayi emlonyeni wakho, bheka udokotela ngokushesha ngoba kungadalwa yizinkinga zezokwelapha.
Ngokuphikisana nenkolelo evamile, umoya onukayo, owaziwa nangokuthi iHalitosis, awuveli esiswini noma emaphashini. Ezimweni eziningi, ukuhlanzwa nje kolimi kuzowenza kahle umsebenzi.
Izinganekwane Ezihlanza Amazinyo Ziyi-6!
Usuku lokuthumela 10 Julayi 2021
Amazinyo Ama-Whitening kuyindlela esheshayo, engabizi futhi elula yokwenza ngcono ukubukeka kokumamatheka kwakho, ngakho-ke kuyamangaza ukuthi abantu abaningi kakhulu abazami. Isizathu sokuthi ukwenziwa mhlophe kungathandeki njengoba kufanele kube njalo kungenxa yezinganekwane ezihambisana nakho - ngakho-ke sizodiliza izinganekwane ezi-6 eziphezulu ezihambisana nokwenziwa mhlophe kwamazinyo, futhi ngethemba lokuthi sizokuqeda ukwesaba onakho mayelana nalokhu okumangazayo ukwelashwa!
1. Amazinyo amhlophe enza amazinyo akho abe nokuzwela:
Ukuzwela okuncane okulandela ukwenza mhlophe kuyinto evamile, futhi kungancishiswa ngudokotela wakho futhi kwelashwe kalula. Lokhu kungokwesikhashana nje futhi kuzonyamalala ngemuva kwamahora ambalwa. Sisebenzisa kuphela imikhiqizo yePhilips Zoom equkethe i-peroxide kanye ne-ACP (i-amorphous calcium phosphate) ukukhumbula kabusha, i-potassium nitrate ukucekela phansi isisu ne-sodium fluoride. Abanye abantu abanakho ukuzwela nhlobo, kanti abanye banokuncane. Lokhu futhi kungenxa yokuguga kwamazinyo, futhi kungenziwa kube kubi kakhulu yizinkinga ezinjengokuguguleka kokudla, imifantu yezinwele noma ukugaya lapho kwafakwa khona koqweqwe lwawo futhi i-dentine ivezwa obala. U-Emma King wethu, uzozivimbela lezi zindawo ngesikhathi senqubo yenhlalo ukuze anciphise noma yiliphi ithuba lokuzwela. U-Emma ubuye aphule inqubo yesihlalo ize ibe ngamaseshini ama-2 ukuze ikhululeke kakhudlwana kuwe. Usaphetha ngemiphumela efanayo, kuthatha isikhashana nje!
2. Ukwehliswa Kwamazinyo Kulimaza Koqweqwe Lwawo
Lapho ukwelashwa kwenziwa ngungoti wamazinyo, kusetshenziswa izinto ezifanele ezivunyelwe izinhlangano zamazinyo futhi zabhaliswa noMkhandlu Wokulawulwa Kwemithi, abukho ubungozi koqweqwe lwawo lwamazinyo. Yonke imikhiqizo yePhilips Zoom izinze ngokuphelele futhi ayidingi ukufakwa esiqandisini. Zi-barelled-double futhi zine-pH engu-8 uma zisebenza, ngakho-ke uma kukhona okusizayo ukukhumbuza amazinyo ngesikhathi senqubo yokwenza mhlophe.
3. Amazinyo amhlophe abukeka engeyona eyemvelo
Ukwenza mhlophe kwamazinyo ukwelashwa okuqhubekayo, ngakho-ke kukhanyisa amazinyo akho ngemibala embalwa isikhathi ngasinye lapho uya khona. Uma wenza inqubo yesitulo uzophuma nomphumela omangalisayo ofike ku-8 shades ube mhlophe kepha kusazodingeka ukwenze cishe isonto lokwenziwa mhlophe ekhaya ukuqinisekisa ukuthi umbala ubambile. Okwengeziwe ongakwenza ngokuhambisana nesihlalo sakho okwenza mhlophe umbala uqhubeke isikhathi eside futhi kuncane kakhulu okudingeka ukulondoloze. Imiphumela iyamangalisa, kepha nakanjani akuyona eyemvelo. Eqinisweni, uma uzwa sengathi amazinyo akho “asemhlophe kakhulu”, ungayeka ukwelashwa. Faka i-bleach njalo ezinsukwini ezimbalwa udlule umphumela owufisayo, njengoba umbala uzocwilisa ngomthunzi noma kunjalo lapho umisa ukwenza mhlophe. Umuntu ngamunye unendawo yokuphela emhlophe ehlukile lapho amazinyo eyeka ukushintsha umbala. Yilapho futhi kubalulekile ukuyeka ukwenza mhlophe bese ungena ekunakekelweni kwesb. Imizuzu engama-30 ugqoke amathreyi ngenyanga.
4. Amazinyo Amhlophe Hlala Mhlophe
Ngeshwa, amazinyo amhlophe azoqhubeka nokungcola ngokuhamba kwesikhathi. Itiye, ikhofi, iwayini nokubhema kungamabala amazinyo noma ngabe asenziwe mhlophe noma cha ngakho sincoma ukuthi wehlise ukuze ugcine imiphumela yakho. Ungaphinda wenze mhlophe amazinyo akho njalo ezinyangeni ezimbalwa ukuze uvuselele futhi ukhanyise ukumamatheka kwakho. Inani lesondlo elidingekayo lincike emikhubeni yomuntu ngamunye kanye nenani mhlophe lasekhaya elenziwe ekuqaleni. Uma usula iblachine ngokushesha ubuyela emuva, yingakho ingekho into efana neyokuqokwa esihlalweni ukuxazulula zonke izinkinga zakho ezenziwa mhlophe.
5. Isithelo sisusa amabala.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukugcoba izithelo ezinjengobhanana, ulamula kanye nama-strawberry emazinyweni abo kuzoqhakambisa ukumamatheka kwabo. Iqiniso ngukuthi izithelo zizolimaza kakhulu kunokuhle, futhi zizodala izinkinga eziningi lapho zigcotshwa emazinyweni njalo. Izithelo i-acid noshukela zizokonakalisa futhi zilimaze amazinyo akho, ziwenze azwele futhi angeneke kalula emigodini.
6. Amalahle asebenzayo amhlophe amazinyo
Kunomehluko omkhulu phakathi kwemikhiqizo yokwenza mhlophe nemikhiqizo yokufaka amakhandlela. Imikhiqizo emhlophe yinoma yimiphi imikhiqizo esusa amabala angaphezulu futhi inikeze izinyo libe mhlophe, libukeke lihlanzekile. lokhu kufaka phakathi amalahle acushiwe, okugcoba amazinyo nokuqokwa kwenhlanzeko yomlomo. Ukweqisa amabala kulapho empeleni siguqula umbala wangaphakathi wamazinyo akho sisebenzisa inqubo yamakhemikhali ene-hydrogen noma i-carbamide peroxide. Simane sinciphise ama-molecule ahlanganisayo ezinyo, ngakho-ke alukho ushintsho noma umonakalo esakhiweni.
Amalahle asebenzayo muhle ekulondolozeni abamhlophe bakho abaphambili ngemuva kokuba esihlalweni uphume umbala noma uthathe i-bleach ekhaya, futhi ususe amabala nobuthi ngakho-ke kuyasiza nempilo yomlomo. Sidayisa umkhiqizo obizwa ngeCharwhite owenzelwe ngokukhethekile amazinyo akho nemvelo ngokuphelele. Kuhle kakhulu ukuthi imnene ngokwanele ukuyisebenzisa nsuku zonke futhi namanje ngeke idale monakalo emazinyweni akho.
Ukuze ube mhlophe kahle amazinyo, ukuhlangana nathi kuyindlela engcono yokuthola imiphumela oyifunayo. Siyayiqonda impilo yomlomo futhi singahlanganisa izincomo ezenzelwe wena ezikuvumela ukuthi uthole imiphumela emihle kakhulu kusikhathi esisebenzele wena. Sizokusiza futhi uqonde ukuthi inqubo yokwenza mhlophe isebenze kanjani, iqaphe intuthuko yakho, futhi uphathe noma yiziphi izinkinga zokuzwela ezingase zingaveli kakhulu.
Ukuthola eminye imininingwane noma ukubhukha UKUBONISANA NGAMAHHALA NGAMAMINITHI AMAHHALA angu-15 faka isicelo, noma xhumana nomkhuba wethu namuhla.
Okungaphezu Kwe-Aesthetics: Imiphumela Ye-Overbite
Usuku lokuthumela 9 Julayi 2021
Abaningi bethu bahlobanisa izinciphiso nokumamatheka okulinganiselwe kanti-ke, ukungahambi kahle kwamazinyo ethu kungaholela kwezinye izimo ezingaba zimbi kakhulu. Ake sibheke ukuthi kungani i-overbite kufanele ihlolwe njalo udokotela wamazinyo wakho.
- Uma amazinyo aphezulu egaya emgqeni ongezansi, kuzolahleka koqweqwe olubalulekile.
- Ubuhlungu bomhlathi nokungaphatheki kahle okufanayo kwemisipha kungavela ekulindeni.
- Amazinyo angena ezinsinini angaholela ekungenweni yizinsini uma isimo sishiywa singalawuliwe.
"Ngenhlanhla, ukulungisa ukulutha ngokweqile imvamisa kuyinto engenziwa kalula futhi unomphela ngokwelashwa kwamazinyo."
Ingabe i-Miracle Dental Jab isiseduze?
Usuku lokuthumela 5 Julayi 2021
Kubukeka sengathi kungahle kube nezindlela zokuvikela ngempumelelo izimbotshana ekwakhiweni ngomuthi wokugoma ongaba khona. Uquketheni lo mhlanganiso?
- Esinye sezithako eziyinhloko ibhaktheriya elaziwa ngokuthi Izinguquko ze-Streptococcus.
- Le nto ihlanganiswa ne- E. Coli kanye namaprotheni abizwa nge-flagella.
- Lawa maprotheni abese esetshenziselwa “ukuhlanza” amazinyo ngokomzimba nokusiza ukuvimbela izimbotshana.
"Kusazodingeka ukuthi ugeze amazinyo abo kabili ngosuku ukugwema uhambo oluya kudokotela wamazinyo."
Funda lapha ukuthola eminye imininingwane:
Ukuthi Amazinyo Omzimba Angakusiza Kanjani Ukumomotheka Kwakho
Usuku lokuthumela 1 Julayi 2021
Imicimbi ekhethekile nemisebenzi ngokuvamile kusho ukudla okuhle, inkampani enhle nezithombe eziningi! Ngenani lamanethiwekhi okwabelana ngemidiya namawebhusayithi azungezile, ufuna ukwazi ukubukeka kahle kakhulu kulowo nalowo futhi ukumamatheka okukhanyayo, okuhle kuyisihluthulelo sokufeza lokhu!
Ngokujabulisayo, kunezindlela zokwelashwa kwezimonyo ezisheshayo ezingenziwa ngokuvakasha okukodwa, ngemiphumela emangalisa! Lezi zinqubo zomzuzu wokugcina zizokubheka isithombe esifanele ngesikhathi somcimbi wakho olandelayo:
Ama-porcelain Veneers awalokothi ahluleke ukumangaza - angakwazi ukumboza i-chip, afihle ukuqhekeka, enze ukushintsha kombala kunyamalale, noma alungise izinyo elakhiwe kabi futhi imiphumela iba mihle. Inqubo iyashesha ngokumangazayo, nesikhathi esincane sokutakula.
Ukubunjwa koqweqwe lwawo
Izinyo elilodwa nje elingashanjiswanga kahle lingehlisa izici zokumamatheka, noma ngabe wonke amanye amazinyo aqondile futhi afanayo. Ukwakhiwa koqweqwe lobuciko kungubuciko bokubumba kabusha izinyo ukuze lihlangane ngokungenaphutha nakho konke ukumamatheka kwakho.
Ukuhlanganiswa kwamazinyo ubuciko bokusebenzisa i-resin eyinhlanganisela emazinyweni akho, ukuze kulungiswe amazinyo anezinkinga zezimonyo nezakhiwo. Amasu amasha anokuhlasela okuncane - akushiye nesakhiwo sakho sezinyo esiningi nokuqeda okuhle.
Ukuthinta okwenziwe ngomzuzu wokugcina kwezimonyo - ukwenza mhlophe amazinyo kukunikeze ukumamatheka okukhanyayo, okuhle ngaphandle kokukhathazeka. Singakhanyisa ukumamatheka kwakho ngamanani amaningi ngesikhathi esisodwa, ngakho-ke lokhu kungezelela okuphelele ngomzuzu wokugcina kulungiselelwa iqembu lakho!
Ukuthola eminye imininingwane nganoma iyiphi yalezi zindlela zokwelapha ezisheshayo, xhumana nomkhuba wethu wamazinyo. Noma vakashela yethu Cosmetic Dentistry ikhasi ukuze ufunde kabanzi ngezinqubo ezahlukahlukene zezimonyo zamazinyo.
Impilo yamazinyo yengane yakho ibaluleke kakhulu ukuthi ucabanga
Usuku lokuthumela 28 Jun 2021
Impilo yamazinyo yengane yakho ingaba nomthelela ohlala njalo kuyo yonke impilo yayo.
- Amazinyo angcolile noma ukumamatheka okuyisigwegwe kungakuthinta kabi ukuzethemba kwengane yakho, ngakho-ke qiniseka ukuthi ukumamatheka kwengane yakho kuyinto abaziqhenyayo ngayo.
- Ukusungula inqubo enhle yokunakekelwa ngomlomo ebuntwaneni kuqinisekisa ukuthi ingane yakho inamazinyo enempilo impilo yayo yonke.
- Zama ukuphatha ukuhlolwa kodokotela wamazinyo njengesipiliyoni esimnandi nesizuzisayo kunokuthile okufanele ukwesabe.
"Ngokukhuthaza imikhuba esebenzayo yokuxubha ekhaya, ungasiza ingane yakho ikhule ukuzethemba kwayo ekumoyizeleni kwayo."
Funda udaba oluphelele lapha: http://yourdentalhealthresource.com/your-childs-dental-health-could-impact-their-growth-and-development/
Usuku lokuthumela 26 Jun 2021
Nakekela kangcono amazinyo akho!
Ukuxubha kabili ngosuku akwanele lapho inhloso yakho ukugcina amazinyo akho esesimweni esihle. Sonke sifuna ukuthi amazinyo ethu asigcine impilo yonke, kepha iqiniso elidabukisayo ukuthi akusithina sonke esizibophezele emikhubeni eqinile yokuhlanzeka ngomlomo.
Izinsizakalo zamazinyo eziphuthumayo
I-OptiSmile iyisimo somkhuba wamazinyo wobuciko oseKapa. Asizinikelanga kuphela ekuhlinzekeni ngezinsizakalo eziningi zamazinyo ezisezingeni elise-Sea Point, kodwa futhi sizibophezele ekusizeni iziguli zethu ngokuzinika izeluleko ezinhle kakhulu.
Sigxila ekukunikezeni ukunakekelwa kwamazinyo okudingayo, kunokukushiya uzizwe sengathi ulume kakhulu kunokuba ukwazi ukuhlafuna.
Oxhumana naye ophuthumayo:
Izingozi zingenzeka nganoma yisiphi isikhathi. Sishayele ku-087 7026886 noma ku-WhatsApp uDkt Yudelman ngqo ku-071 3374807
Emuva ekunakekeleni amazinyo akho
Ukuzibophezela kwakho impilo yakho yonke emazinyweni aphilile kuqala lapho ufunda izizathu zethu zokuthi kungani kufanele wenze amazinyo akho abaluleke kakhulu.
Njengoba ukhula, amathuba okuthola isifo sezinsini nezinye izifo ezihlobene nawo afana nalawa izinsini ezophayo empeleni kungaholela ekulahlekelweni kwamathambo nasekubuyiseleni izinsini. Abesifazane basengozini enkulu yalokhu okwenzekayo, lapho phakathi kweminyaka yobudala engama-30 nengama-50. Ukushintshashintsha kwamahomoni kungenza abesifazane babe sengozini yokungenwa izifo zezinsini, okwenza ukuba nokuqokwa kwamazinyo njalo kubaluleke kakhulu.
I-Flossing yinto enkulu
Uzomangala ngesibalo sabantu abangavuli amazinyo abo. Esinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani abantu bengafloss yingoba bakuthola kudla isikhathi futhi kungenasidingo. Kepha iqiniso liwukuthi, ukushaywa ngotshwala kusifanele isikhathi okusithathayo, noma ngabe ungathola ukuthi kuwumzabalazo omncane. Sincoma i-Waterpik ngezinsini ezilula futhi ezinempilo!
Ungeqisi ukuqokwa kwakho kwamazinyo
Khuluma cishe noma ngubani futhi cishe uzothola ukuthi abantu abaningi ababambeleli kuma-aphoyintimenti abo wamazinyo abanjwa minyaka yonke. Impilo iba matasa, kwesinye isikhathi odokotela bamazinyo babiza kancane, futhi ngokujwayelekile, abantu abaningi abacabangi ukuthi kubalulekile ukunamathela kulezo zikhundla. Njengamanje amazinyo akho angaba sesimweni esihle, kepha ngokuhamba kwesikhathi, ama-aphoyintimenti alahlekile angenza umonakalo omkhulu kunalokho ocabanga.
Amagciwane omlomo angathinta umzimba wakho
Impilo yakho iyonke ingathinteka ngamagciwane asemlonyeni wakho, ikakhulukazi amabhaktheriya angenampilo. Amagciwane abangela isifo sezinsini angatholakala kwezinye izingxenye zomzimba. Isifo sezinsini naso sihlotshaniswa nesifo sikashukela nezinkinga zenhliziyo. Kuhle ukuqaphela ukuthi isifo sezinsini akusiyona imbangela yalezi zinkinga zezempilo.
Xhumana namahora angama-24 ngosuku
Umtholampilo wamazinyo wakwa-OptiSmile eKapa uhlose ukukusiza uthole ukunakekelwa okuphelele kwezempilo yamazinyo. Kanye nokuba nehora lama-24 insizakalo yamazinyo ephuthumayo, singakwazi ukunakekela zonke izidingo zakho zamazinyo zosuku nosuku. Xhumana nathi ukubhuka ukuqokwa kwakho.
Iyini i-TMJ futhi Yelashwa Kanjani?
Usuku lokuthumela 24 Jun 2021
Ukuphazamiseka kwe-Temporomandibular joint (TMJ) kubangela ubuhlungu lapho izingane zihlafuna, zikhuluma noma zizamula. Ilunga lixhuma umhlathi ongezansi kugebhezi futhi lifinyelele endaweni yalo yabantu abadala phakathi neminyaka yobusha.
– Udokotela wamazinyo uzohlonza imbangela yobuhlungu be-TMJ yengane yakho ngaphambi kokuba kwenziwe uhlelo lokwelapha.
- Ukwelashwa okungahlaseli okufana ne-splint kungasiza ekunciphiseni ukucindezeleka esihlokweni futhi kunciphise ukugedla kwamazinyo.
- Ukulunywa okungalungile okubonakala sengathi kubangela ubuhlungu be-TMJ kungase kudingeke ukuthi kudluliselwe kudokotela wamazinyo.
“Uma ingane yakho igedla amazinyo, kuzodingeka i-splint ye-TMJ noma i-mouthguard ukuze kunqandwe umonakalo. Ungakwazi futhi ukunciphisa ukudla okunzima, ukusebenzisa amaphakethe afudumele noma abandayo endaweni ethintekile, noma usebenzise usizo lokwelapha ngokomzimba noma ngisho nokubhucunga ukuze umise ukungaphatheki kahle kwengane yakho kwe-TMJ.”
Ukuhlanzeka ngomlomo nokubaluleka kokunakekela amazinyo akho
Usuku lokuthumela 18 Jun 2021
Ukuhlanzeka ngomlomo nokugcina amazinyo nezinsini ezinempilo kulula kakhulu kunalokho okuzwakalayo. Ngamathiphu ochwepheshe ka-OptiSmile, awusoze wakhathazeka ngephunga elibi noma izimbotshana futhi.
Njengoba sishilo phambilini, odokotela bamazinyo bafana nodokotela. Uma unokuthile okungahambi kahle ngomlomo wakho, lapho usibona ngokushesha, uzoba ngcono kakhulu. Okufanayo kuqinisile ngamazinyo akho. Ngenkathi ukuxubha nokubhabha nsuku zonke kuyisiqalo esihle, kunokunye okungaphezu kwalokho. Silapha ukukusiza ufunde kabanzi ngenhlanzeko yomlomo - ukuthi kusho ukuthini, kungani kubalulekile, nokuthi uwagcina kanjani amazinyo akho esesimweni esincomekayo.
Imikhuba emihle kakhulu yezempilo yomlomo yileso esondla, esiqinisa, futhi sisebenzise ngendlela efanele. Futhi yizo ongaqhubeka ngokungapheli inqobo nje uma uphefumula. Kule ndatshana, sikunikeze ngamathiphu wokuthi ungayithuthukisa kanjani impilo yakho yomlomo futhi uqinisekise ukuthi ulondoloza lobo buhle boqweqwe eminyakeni ezayo.
Uqala ngaphi ngokuhlanzeka ngomlomo?
Kubaluleke kakhulu ukugcina umlomo uphilile. Buza omunye wethu Ochwepheshe bamazinyo! Impilo yezinsini namazinyo akho ixhumene ngqo nempilo yenhliziyo yakho namaphaphu akho. Ngakho-ke kunengqondo ukuthi ukugcina izinsini namazinyo akho kuphilile kungaba nomthelela empilweni enhle ngezindlela ezingaphezu kweyodwa. Nazi izindlela ezintathu inhlanzeko yomlomo engenza ngayo inhliziyo namaphaphu akho kube nempilo.
Ukuxubha amazinyo kubalulekile enhlanzweni yomlomo, futhi kungenziwa kabili ngosuku.
Ukuhamba phakathi kwamazinyo kusiza ukususa uqweqwe.
Ugwayi awuyilungele impilo yakho yomlomo, ngakho-ke uma ubhema, yeka.
Nciphisa iziphuzo ezidakayo; zingadala ukubola kwamazinyo futhi ziholele ezifweni ezinzima zezinsini.
Kubalulekile futhi ukuvakashela udokotela wamazinyo kaningi, noma ungenawo amazinyo emvelo noma amazinyo okufakelwa.
Kubalulekile ukuya kudokotela wamazinyo lapho ngokungazelelwe ubona ushintsho kumqondo wakho wokunambitha noma wephunga.
Lapho usiza umdala ngempilo yakhe, qiniseka ukuthi uxubha futhi uphonsa amazinyo abo uma bengakwazi ukuzenzela bodwa.
Ukuhlanzeka ngomlomo nge-OptiSmile.
Impilo yezinsini namazinyo akho ixhumene ngqo nempilo yenhliziyo yakho namaphaphu akho. Ngakho-ke kunengqondo ukuthi ukugcina izinsini namazinyo akho kuphilile kungaba nomthelela empilweni enhle ngezindlela ezingaphezu kweyodwa.
Ziyini izimpawu zokuhlanzeka komlomo?
Ubuhlungu Bezinyo / Ubuhlungu Bezinyo
Uma ubona ubuhlungu obusezinyweni zakho, ungabunaki. Ubuhlungu akuyona into ofuna ukuyibekezelela, kepha kufanele wazi ukuthi noma ngabe uthuthukisa imvamisa noma ikhwalithi yokuhlanzwa kwakho, ubuhlungu buzoqhubeka. Izimo eziningi zobuhlungu bezinyo zingumphumela wokubola kwamazinyo okukhulu. Ngeshwa, lolu hlobo lokubola lungafinyelela izinzwa zangaphakathi zezinyo futhi lubangele ubuhlungu obukhulu.
Izinsini zokopha / Izinsini Ezivuvukile
Akekho ofuna ukuhlangabezana nezinkinga zempilo yomlomo. Uma ubona ukuphuma kwegazi, ukuvuvukala, noma izinguquko kumbala wezinsini, ungahle ube nenkinga eyisisekelo ngomlomo wakho. Ngeshwa, ukuvuvukala okusesilinganisweni okuhlala isikhathi eside kuwuphawu lokucasula ngaphansi kwezinsini.
Uma ungahlanza ulimi lwakho ebusuku, kungaba uphawu lokuhlanzeka komlomo noma izinguquko kwezempilo. Ukuhlanza ulimi lwakho ubusuku ngabunye kubalulekile, kepha uma kunzima ukukwenza lokho ngaphandle kokubangela i-gag reflex, zama ukusebenzisa okokususa ulimi. Uma ubona izinguquko kumbala nokuthungwa kolimi lwakho, hlangana nodokotela wamazinyo wakho.
Kukhula emlonyeni wakho
Kuyinto esabekayo ukubona ukukhula emlonyeni wakho. Abanye abantu bayazibona bona ngokwabo, kepha abanye bangakhonjwa ngudokotela wabo wamazinyo. Okubalulekile ukukhomba nokwelapha ukukhula ngokushesha okukhulu. Ukuhlanzeka ngomlomo, ukudla, kanye neminye imikhuba kungadala lokhu kukhula. Uma ubona isigaxa, isilonda, isilonda, noma okunye ukukhula okuhlala endaweni efanayo izinsuku eziningi, khuluma nodokotela wamazinyo ngakho.
Ungayinaki inhlanzeko yomlomo iminyaka, futhi uzothola ukuthi izinsini zakho ziqala ukuguga. Uzosala nezimpande zamazinyo ezivele obala. Lokhu kuyisibonakaliso esicacile sokuthi unokubola okukhulu emlonyeni. Indlela engcono kakhulu yokuphatha le nkinga ukuthola ukuhlinzwa noma ukuhlanzwa amazinyo akhethekile.
Sibuze namhlanje ukuthi siziguqula kanjani izimpilo ngamandla we-Genuine Invisalign!
Thintana nomunye wethu wamazinyo ongoti ukuthola eminye imininingwane yokuthi singakusiza kanjani ukuthi ugcine futhi uphumelele ekugcineni inhlanzeko yakho yomlomo ihlanzekile.
Bhuka ukubonisana kwamavidiyo wamahhala namuhla!
Amathegi inhlanzeko yomlomo
Izophela Nini Imiphumela Ye-Anesthesia Yamazinyo?
Usuku lokuthumela 2 Jun 2021
Nakhu okudingeka ukwazi uma unenqubo yamazinyo edinga i-anesthesia.
- Uma unikezwe iNovocaine, ungalindela ukuthi ukuba ndikindiki kuhlale ihora elilodwa.
- Ungase uzwe imiphumela isikhathi eside kunaleyo uma unikezwe ezinye izidakamizwa.
- I-Anesthesia ithatha isikhathi eside ukuphela lapho amazinyo onegciwane elilodwa noma amaningi etheleleka.
Isikhathi ngqo nemiphumela iyahluka kuye ngomuntu nomuntu, ngakho-ke unganqikazi ukubuza udokotela wamazinyo wakho ngalokho ongakulindela esimweni sakho esithile.
Funda udaba oluphelele lapha: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321880.php
Ukugcwalisa noma Umsele Wempande - Yikuphi Engikudingayo?
Usuku lokuthumela 29 May 2021
Ezinye izimbotshana zidinga ukugcwaliswa okuyisisekelo ukuzilungisa kanti ezinye zidinga umsebenzi ophelele owaziwa ngokuthi ukugcwaliswa kwezimpande.
- Umgodi omncane odala ukuzwela okuncane noma ubuhlungu ngokuvamile ungalungiswa ngokugcwaliswa okuyisisekelo.
- Emigodini emikhulu ebuhlungu lapho kungenzeka ukuthi impande yezinyo ifile, kungadingeka ukugcwaliswa komsele wezimpande.
Kungcono ukubhuka ama-aphoyintimenti avamile nodokotela wamazinyo ukugcina amazinyo nezinsini kuhlanzekile ku-plaque nokuthola noma yiziphi izimbotshana kusaqalwa. Lokhu kuzokusiza ukuthi ugweme izinkinga ezibuhlungu.
"Udokotela wakho wamazinyo ungumuntu ongcono kakhulu ongalinganisa ukumamatheka kwakho ukuze uthole ukwelashwa."
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/is-a-filling-okay-or-will-i-need-a-root-canal/
Ukubhangqa Kuyadingeka Ngemuva Kokudla Okunenkinga
Usuku lokuthumela 22 May 2021
Ukudla okuthile kuvame ukubambeka phakathi kwamazinyo futhi kungadinga ukuflaza okwengeziwe. Imfucumfucu yokudla, ishiywe inganakiwe, ingaholela ekwakhiweni kocwecwe futhi, futhi, kubangele izimbotshana.
Ukudla okuningi okudinga ukuhlafunwa okuningi kungaba yinkinga kepha ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhelwe emazinyweni akho ngemuva kokudla:
- I-Caramel noma uswidi wethofi no-popcorn
- Isipinashi kanye ne-broccoli
- Uphayinaphu nomango
Yize udokotela wamazinyo wakho angancoma ukuthi uflosswe kanye kuphela ngosuku “lokhu kudla kungadinga ukukhishwa okungeziwe”Kodwa izinzuzo zezithelo nemifino zidlula noma yikuphi ukuphazamiseka. Ungafunda i-athikili ephelele ngale ndaba https://yourdentalhealthresource.com/which-foods-require-additional-flossing/.
Kungani Ingane Yakho Encane Kufanele Ivakashele I-Orthodontist
Usuku lokuthumela 18 May 2021
Abazali kufanele bahambise izingane zabo kudokotela wamazinyo noma kudokotela wamazinyo ngosuku lwabo lokuzalwa olungu-7. Njengoba amazinyo ezingane ewa futhi kuqubuka amazinyo ahlala unomphela, kulula ukuba nezinkinga ze-orthodontic njengokulunywa okungalungile namazinyo aminyene ukukhula.
- Ukwelashwa nge-Orthodontic kwenza kube lula ukuhlanza amazinyo, ngaleyo ndlela kuthuthukise inhlanzeko yomlomo.
- Vikela ukuzethemba kwengane yakho ngokwelapha ukulutheka kwayo, ukululaza noma ukulumelela ngokweqile.
- Ukwelashwa ngaphambi kwesikhathi ngamazinyo kuzoqinisekisa impilo yomlomo ephelele yengane yakho, ngaleyo ndlela kongele isikhathi nemali.
Ukuvakashela udokotela wamazinyo nakho kuhle ukuvimbela izimbotshana nezifo zezinsini.
Siya lapho ubuchwepheshe busisa khona
Usuku lokuthumela 10 May 2021
Siyabona ukuthi kungaba nzima ukunquma ngodokotela wamazinyo omusha wena nomndeni wakho. Ngaphandle kweseluleko somngani othembekile ongazi ikhreme de la crème yamazinyo eKapa, ​​ungahle ubhekane ne-Google futhi ukhethe igama, ngokungahleliwe. Lokhu ngokusobala kungumsebenzi oshukumisa kakhulu izinzwa, ubona sengathi lo muntu ongahleliwe nguyena ozokwenza uthi "AAAAAAAAAAAAAH!"
Ngaphezulu kweminyaka engama-28 yokuhlangenwe nakho kwamazinyo emhlabeni jikelele, uDkt Clifford Yudelman unikeza ukunakekelwa kwakamuva, kobuchwepheshe obuphezulu, okwenzelwe wena wonke amalungu omndeni wakho. Izinsizakalo zethu zamazinyo eziphelele zihlanganisa ukwelashwa kwamazinyo okuvamile, okuvimbela, okubuyisela esimweni nokwenziwa kwezimonyo, futhi siyaziqhenya ngokuhambisana nobuchwepheshe obusha kakhulu. Nazi ezimbalwa esisebenzisa njengamanje:
Imicroscope Enhanced Dentistry is practice by about 2% of odokotela bamazinyo emhlabeni wonke. Manje sesikwenza BONKE amazinyo ethu okubuyisela esimweni sokukhulisa izikhathi eziyi-16-25 ngemicroscope yethu yakamuva yeLeica M320 Dental. Lokhu kusivumela ukuthi sicwenge imiphetho yemiqhele kanye nokufakwa kahle ngokunembile, kanye nokuphatha izimbotshana ngendlela elondolozeka kakhulu.
UDkt Yudelman ukufanisa nokuhlinzwa kwezikhiye zakamuva kwizinyongo nasemadolweni, nokuhlasela okuncane nokulungiswa kwesici, okuvumela ukululama okusheshayo nokulimala okuncane kwesibambiso. Isibonakhulu sixhunywe kwikhamera yevidiyo eyi-megapixel eyi-10 futhi singathatha izithombe zezimo zokugcinwa ngokuphelele kwamarekhodi.
Iziguli zethu nazo bezinomdlandla omkhulu nge-Numbing Wand esaqala ukuyisebenzisa ekuqaleni kuka-2011, ngoba isikhathi esiningi abazi nokuthi sebenomjovo. Ngale nsimbi enkulu, siyakwazi ukuqaqamba izinyo elilodwa esikhundleni sokushiya isiguli sinomuzwa ongajabulisi wolimi noma indebe ebandayo.
I-laser yethu yokuxilonga, iDiagnoDent, isivumela ukuthi sithole izimbotshana ngaphambi kokuba zibe yinkinga. Lokhu kusho ukuthi amazinyo angabuyiselwa noma avaleke ngokugcwaliswa okumhlophe okunamandla kakhulu ngaphambi kokuba avele kwi-x-ray noma asondele emsipheni (impande canal). Sisebenzisa futhi enye i-diode laser ekwelapheni okuhlukahlukene ezinsinini, ikakhulukazi lapho kufakwa umqhele.
Akekho ofuna ukuhlala kudokotela wamazinyo usuku lonke, akunjalo? Ingasaphathwa eyokubuyela ekuvakasheleni okulandelayo. Ungakhathazeki, lokho ngeke kwenzeke lapha e-OptiSmile. Ubuzelani? Kalula nje, sinikezela ngezinsizakalo zokubuyiselwa kweCEREC, okuvumela uchwepheshe wethu ukuthi aqedele imiqhele, ama-veneer, okufakwayo nokugcwaliswa ngokuvakasha okukodwa. I-CEREC inikeza ukubuyiselwa okwenzelwe ikhompyutha kwezinyo lakho ngaphansi kwamahora amabili - Akukho kungcola, akukho mpikiswano.
Sishayele ucingo namuhla ukwengeza ukumamatheka kwakho. Noma ngabe uzwa ubuhlungu bokuqaqanjelwa ngamazinyo noma unenkinga ephuthumayo, sizohlala senza konke okusemandleni ethu ukukubona ngosuku olufanayo.
Kungenzeka yini ukuthi Ubuhlungu Bakho Bomhlathi bube ngenxa Yenye yalezi Zimbangela?
Ubuhlungu bomhlathi bungavela emithonjeni eminingi. Kubalulekile ukubona udokotela wamazinyo wakho ukuthola imbangela, ukuqinisekisa ukuthi indlela yokwelashwa efanelekile iyanikezwa.
- Isifo sezinsini esingalashwa, ukugaya amazinyo kanye ne-temporomandibular joint disorder (TMJ) kungaholela ebuhlungwini bomhlathi.
- Ubuhlungu bomhlathi bungaphumela nakweminye imithi, izifo ezingaphansi, kanye nengcindezi yesono ngenxa yokutheleleka, umkhuhlane noma ukungezwani nezinto ezithile.
- Udokotela wamazinyo wakho angaqiniseka ukuthi ubuhlungu bomhlathi wakho buyizinzwa, amathambo noma izicubu.
“Ukungakhi kahle umhlathi nakho kungaba nomthelela ebuhlungwini obubonakalayo.”
Funda udaba oluphelele lapha: https://www.rd.com/health/conditions/causes-of-jaw-pain/
Kungani Amazinyo Okuhlakanipha Enenkinga Kangaka?
Usuku lokuthumela 5 May 2021
Abantu abaningi babuzwa ubuhlungu lapho kungena amazinyo abo okuhlakanipha, kepha kunesizathu sokuthi kungani lezi zinhlungu zinenkinga.
- Okhokho bethu babewadinga la mazinyo “athe xaxa” ukuhlafuna izimpande ezinzima nenyama eqinile, futhi imihlathi yawo yayimikhulu ukuze ihlanganise amazinyo.
- Ukudla kwesimanje akudingi izinsalela zomlomo ezinkulu, ngakho-ke uma la mazinyo engena avame ukukwenza ngendlela engeyona.
- Umhlathi womuntu uguqukile futhi waba mncane, ngakho-ke amazinyo okuhlakanipha awanayo indawo yokungena adudule amanye amazinyo endaweni.
- Lawa mazinyo angadala kalula ukutheleleka eceleni kwe-gumline.
Ukuvimbela kuyisihluthulelo, ngakho-ke hlolisisa amazinyo akho okuhlakanipha uma ubona ukungaphatheki kahle njengoba kungena.
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/do-we-need-our-wisdom-teeth/
Ungayiphatha Kanjani i-Acid Reflux
I-Acid reflux, eyaziwa nangokuthi isifo se-reflux se-gastroesophageal (GERD), futhi ingadala ukuguguleka koqweqwe lwawo. Lokhu kuvame ukuholela emazinyweni aqhephukile nalahle umbala, athinte kabi ukumamatheka kwakho.
Udokotela wamazinyo wezimonyo ufikile, futhi ukumamatheka kungabuyiselwa ngomsebenzi omncane wamazinyo ongaphazamisi ngaphansi kwesibonakhulu ukuqinisekisa ukuthi inani elincane lamazinyo liyasuswa enqubweni yokubuyisela esimweni. Ama-Veneers, imiqhele kanye nezinto zokugcwalisa eziyinhlanganisela zingenza izimanga ezimangazayo ekubuyiseleni ukumamatheka kwakho okuhle.
Ukungathathi hlangothi i-pH emzimbeni nasemlonyeni kubalulekile ukusiza ukulawula ukuguguleka, njengokulawula okuqinile kokudla komuntu. Ukuhlafuna i-xylitol gum kusiza ukuvuselela amathe futhi kunciphise i-pH emlonyeni.
Sebenzisa izinto zokuxubha kanye nama-gel aqukethe izithako zokukhumbuza nokukhumbula izinto ezinjenge-fluoride ne-amorphous calcium phosphate.
Ukulimala kwamazinyo kusuka ku-acid reflux kubi kakhulu ngesikhathi sasebusuku njengoba ugwinya kancane bese uveza amathe amancane.
Amathegi impilo yamazinyo, udokotela wamazinyo, impilo yomlomo, Smile, amazinyo
Izinto Odinga Ukuzazi Ngokufakwa Kwamazinyo
Usuku lokuthumela 2 May 2021
Ukufakwa kwamazinyo sekuyisixazululo esidumile samazinyo alahlekile ngenxa yezinzuzo zawo eziningi. Nazi izinto ezintathu odinga ukuzazi ngazo.
- Izimila zingaba utshalomali lwempilo yonke inqobo nje uma zinakekelwa kahle.
- Ukufakelwa okufakelwe inqubo engenabuhlungu eyenziwe ngaphansi kwe-anesthetic yendawo.
- Izimila zamazinyo zinezinga lokuphumelela elihlaba umxhwele elingamaphesenti angama-98.
Unentshisekelo? Vakashela udokotela wamazinyo wakho ukuze uxoxe ngokuthi izimila ziyindlela enhle yini kuwe.
Funda udaba oluphelele lapha: https://yourdentalhealthresource.com/how-long-do-dental-implants-last-cosmetic-dentists-answer-your-questions/
Isixhumanisi Esingenakuphikwa Phakathi Kokudla Okunempilo Nenhlanzeko Yomlomo
Ngenkathi udokotela wamazinyo engahlanza amazinyo futhi abhekane nanoma yiziphi izingqinamba zomlomo, iziguli kufanele futhi zazi ukuthi umlomo onempilo ugxile kokudla abakudlayo. Yiziphi ezinye zezincomo eziphezulu ezinikezwe ochwepheshe?
- Ushizi ungasiza ukwehlisa amazinga e-asidi ngaphakathi komlomo; ukunciphisa amathuba okubola kwamazinyo.
- Ukuphuza amanzi amaningi kususa ubuthi namagciwane.
- Ijusi le-Orenji lithuthukisa impilo yamathambo futhi lihle kakhulu kulabo abangakwazi ukubekezelela imikhiqizo esekwe ku-lactose.
"Uma uthanda imikhiqizo yobisi efana noshizi, lokhu kungaba yindlela yokumamatheka okunempilo."
Ungabhekana kanjani nokugaya amazinyo
Usuku lokuthumela 27 Ephreli 2021
Uyagaya amazinyo lapho ukhathazekile, uthukuthele noma ulele? Lokhu kubizwa ngokuthi yi-bruxism. Ngeshwa, ukugaya amazinyo kungadala izinkinga eziningi zamazinyo njengokuguguleka koqweqwe lwawo, izimbotshana, ukuzwela nokushintshwa kombala.
- Ukuphathwa ikhanda ekuseni, umhlathi obuhlungu nomsindo wokugaya ebusuku konke kuyizimpawu.
- Ukugaya amazinyo kuzokona amazinyo, mhlawumbe kudinga ukufakelwa kwamazinyo, imisele yezimpande namazinyo okufakelwa.
- Gwema iziphuzo ezine-caffeine futhi usebenzise amasu okudambisa ukucindezeleka ukuze uphumule.
Udokotela wamazinyo wakho angakunikeza idivayisi ukusiza ukuphatha i-bruxism yakho. Bhuka i-aphoyintimenti nodokotela wamazinyo namuhla bese uhlolwa futhi welashwe amazinyo akho.
Ukhathazekile ngokuthi ama-veneers wamazinyo angakhuphula ukuzwela kwezinyo?
Usuku lokuthumela 26 Ephreli 2021
Ama-Veneers ayindlela enhle yokumboza ukungapheleli okuncane emazinyweni. Odokotela bamazinyo imvamisa kudingeka basuse koqweqwe lwawo ukuze lulingane nezinto ezibukeka kahle. Le yinqubo eyamukelwa kakhulu futhi akufanele idale ukukhathazeka.
- Ama-Veneers angalungisa amazinyo anamabala, izikhala, ukuqondanisa, nokuzwela.
- Kuyinto evamile ukuzwa ukuzwela okuthile okwesikhashana ngemuva kokuthola izinto ezibonakalayo.
- Ukuzwela okuqhubekayo kuyisibonakaliso sokuthi ama-veneers awazange ahlangane kahle namazinyo akho futhi kufanele ubone udokotela wamazinyo.
Ungabudambisa kanjani ubuhlungu bamazinyo ngaphambi kokuba ubone udokotela wamazinyo
Usuku lokuthumela 15 Ephreli 2021
Amazinyo angasigcina siphapheme ebusuku. Amazinyo abangelwa izifo, ukugcwaliswa okuphukile, amazinyo axegayo noma izinsini ezibuyisa emuva. Kubalulekile ukubona udokotela wamazinyo ngokushesha lapho izinyo liqala ukulimala. Esikhathini esifushane, ungadambisa ubuhlungu ngamakhambi ambalwa asekhaya.
- Dambisa izinhlungu ngokuphuza i-painkiller efana ne-ibuprofen bese ufaka i-ice pack endaweni ethintekile noma uphuze i-peppermint.
- Bulala noma yimaphi amabhaktheriya akhona ngokuhlafuna ugarlic noma ugeze umlomo wakho ngesihlambi somlomo noma ngamanzi afudumele, anosawoti.
- Faka ithonsi elilodwa le-thyme emanzini engilazi bese usebenzisa ingxube ukugeza umlomo wakho.
Bheka udokotela wamazinyo ukuze uthole ukuxilongwa okuqhubekayo nokwelashwa.